Johane Chitsauko 01. Mwari anouya panyika. Mwari anogara kupi?
» Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Johane Chitsauko 01. Mwari anouya panyika. Mwari anogara kupi?
Johane Chitsauko 01. Mwari anouya panyika. Mwari anogara kupi?
JOHANE 1:1 Pakutanga Shoko rakanga riripo, Shoko rakanga riri kunaMwari, Shoko rakanga riri Mwari.
Kubva pakutanga chaipo Mwari aive nezano nekereke yake yechokwadi. Ndiyo inoita Mwenga wake. Mwenga ari pedyo nemurume wake kukunda vamwe vanhu vose. Saka kereke yaMwari ndiyo Muviri wake wechokwadi sezvo achida kugara mumoyo yevanhu vake ovaita kuti vazviwisire kuShoko raMwari.
Saka Mweya waMwari usingaonekwe uri kutsvaga muviri wekurarama mauri, kuti aratidzwe hunhu hwake uye aite kuti Shoko rake rizadziswe kupfurikidza Muviri unogadzirwa nevatendi.
Kuti tiwane kunzwisisa kuri nani pamusoro pemavambo, ngatitarisei Mwari pakupedzisira muBhuku raZvakazarurwa. Kune zvisikwa zvipenyu zvina zvakapoteredza chigaro chaMwari chehushe Kudenga. Shumba, nzombe, munhu uye gondo.
ZVAKAZARURWA 4:6 Pamberi pechigaro chovushe pakanga panegungwa rakavonekera, rakafanana nekristaro; napakati pechigaro chovushe, napamativi ose echigaro chovushe, pakan ga panezvisikwa zvina zvipenyu, zvizere nameso mberi neshure kwazvo.
7 Chisikwa chipenyu chokutanga chakanga chakafanana neshumba, chisikwa chipenyu chechipiri chakanga cakafanana nemhuru, chisikwa chipenyu chechitatu chakanga chinechiso chakaita sechomunhu, nechisikwa chipenyu chechina chakanga chakafanana negondo rinobururuka.
Meso anotaura pamusoro pehungwaru. Zvisikwa zvemweya izvi kana kuti masimba zvinoziva ramangwana (zvine meso kumberi) uye zvinoziva zvinhu zvakadarika (zvizere meso kumashure). Nekuti Mwari anogara kunze kwenguva anokwanisa kuona zvose zvichaitika nezvakadarika. Isu tine miganhu mumugove wedu mukati menguva yatinozvarwa mairi yatiri kufamba mairi, kusvikira tafa.
Masimba emweya mana aya achadzoreredza nekutungamirira kereke mukati mezviitiko zvakasiyana zvinoiwira pakufamba kwemakore 2 000 enhorondo yekereke.
Shumba inomiririra zvitendero zvechokwadi zvemadzibaba mapostora apo vakanyora Testamente Itsva nekutungamirira kereke yekutanga yakagamuchira rubapatidzo rweMweya Mutsvene kuti Jesu agare mumoyo yevanhurume nevakadzi vatsvene. Pakutanga vakatenda nekurarama kupfurikidza Bhaibheri vatungamiriri vevanhu vasati vasimuka kunotungamirira kereke kuti ifambe munzira dzemafungiro evanhu.
Mhuru inzombe duku. Izvi zvinomiririra makore 1 200 ekutongwa kwekereke nenzira yezvematongerwo enyika kwakatangira pakanzuru yeNicene muna 325 AD zvikaenderera mberi kusvika pakupera kwenguva yeRima muna 1520 AD. Kumanikidzira Tiriniti muBhaibheri paNicaea kwaireva kuti vanhu vaitungamirira vaitamba neChiedza chenyika, chakabva chatanga kudzima. MaAchibhishopu asimo muBhaibheri, maKadhinari nemaPope vakabva vatanga kutonga. Nzira dzisimo muMagwaro dzakaita sedzekuti “Mwari mumwechete muVanhu vatatu”, “Munhu wechipiri muhuMwari”, “Vanhu vakaenzana”, “vekuita kumwechete”, kana vehunhu humwechete” dzakabva dzaputira kufunga kwevanhu pavakabva varamba vachibva zvakanyanya pane zvakanyorwa muBhaibheri. Bhaibheri ndiro Hupenyu. Kubva pane zvakanyorwa neBhaibheri zvinoreva kurasikirwa nehupenyu. Izvi zvinoratidzwa nemucherechedzo wenzombe.
Pakupedzisira kereke inozvirumbidza kuti inoziva asi zviri zvinhu zvisina kunyorwa muBhaibheri.
Kudarika hafu yenguva yese yekereke yakapera iri munzvimbo yakaipaiyi pamweya. Makumi emamiriyoni evanhu vakaramba kupfugama kuvakuru vezvematongerwo enyika nevakuru vemakereke veNguva yeRima vakafa, vakuru ava vaive vekereke yeRoman Catholic. Kwaive nenguva yakawandisa kuti mhuru ikure iite nzombe. Asi nzombe chipenyu chakasikirwa kutakura mutoro nekuuraiwa. Pakupedzisira kwehupenyu hwayo inourairwa nyama yayo yakanakisa. Mweya waMwari unomiririrwa nenzombe wakakurudzira kereke kuti ishingirire kutambudzika uku uye kuuraiwa kwese.
Chisikwa chipenyu munhu. Vamutsiridzi vakaita saMartin Luther kuGermany mugore 1520 vakadzosa ruponeso kupfurikidza kutenda chete, kwete mabasa. Makore akapoteredza 1750 John Wesley kuEngland akadzosera chokwadi cheBhaibheri chehutsvene uye kuparidzira chakazounza nguva huru yemamishinari yakatanga makore akapoteredza 1790.
Gondo rinobhururuka rine hunhu huviri hukuru. Rinogona kubhururuka kuenda mudenga denga uye rinoona zvakapinza zvekuti rinoona zvinhu zvinokwanisa kusaonekwa nevamwe.
Mugore 1906 kusvika kwevePentecosti mumugwagwa weAzuza kuAmerica kwakabva kwatanga kudzosa rubapatidzo rweMweya Mutsvene kupfurikidza simba remweya unoshamisa. Mapapiro makuru eGondo akaenda mudenga munzvimbo dzeMweya waMwari.
Zvino muna 1947 William Branham akabva atanga kutapa mharidzo pamakaseti zvakaita kuti vanhu vaiteerera vakwanise kubata zaruriro yezvakavanzika zvakadzama zveMagwaro: Mbeu yechipenyu chakazotukwa chikashanduka kuita nyoka chii? Chikara ndiyani? Chivi chekutanga chaive chii? Nei Jesu akanyora kaviri muvhu pakauya vanhu kwaari vachida kuti avatendere kutema mukadzi aive mutadzi nemabwe? ... nezvimwe zvakadaro. Kereke yekutanga yaiziva zvakavanzika izvi asi zvakazorasika munguva yerima. Kukanganisa kwakakudzwa mukati memakore 1200 eNguva yeRima kwakaita kuti vamutsiridzi nevePentecosti vatadze kuronda tsoro vakakwanisa kugona kuziva zvakawanda zvechokwadi ichi).
Saka pakupedzisira, Mwari anoda kuti kereke yekupedzisira idzokere pane zvakatendwa nekereke yekutanga.
Zvisikwa zvipenyu zvina zvinomiririra chimiro chemakore 2 000 enhorondo yekereke.
Kune zvakare maBhuku mana eEvangeri akamira akachengetedza bhuku reMabasa eMweya Mutsvene munguva yekereke yekutanga.
Bhuku raMabasa aVapositora ndiro kereke yaMwari yekutanga iri pabasa. Ndizvo zvaanoda kuti zvive kereke yake.
Bhuku rimwe nerimwe reEvangeri rinoratidza Jesu sechimwe nechimwe chezvisikwa zvipenyu izvi kana masimba azvo.
Bhuku reEvangeri rechina ndiJohane.
Anoratidza Kristu seGondo rinobhururuka, Mweya waMwari unokwira kudenga munzvimbo dzepamusoro dzeMweya uchiona nekuona kunoshamisa kwakapinza.
“Pakutanga Mwari...” ndiko kutanga kweBhuku raGenesisi.
Mweya hauonekwe uye hauna chimiro. Saka Mwari asingaonekwi aifanira kuzvipfekedza muMuviri unoonekwa. Pano muTestamente Itsva Mwari anoziviswa akapfekwa muShoko rake. Mwari anogara muShoko rake seMuviri wemweya umo Mweya waMwari usingaonekwe unotanga kuonekwa kuvanhu vemweya vakaita sengirozi kuDenga.
Hurefu hupamhi uye kureba kwekukwira kudenga ndizvo zvimiro zvitatu zvine nzvimbo.
Nguva ndiyo imwe nzvimbo yechina yatisinganzwisisi sezvo inoita seinodururwa ichienda rutivi rumwechete kubva kumashure ichienda kumberi (kubva muzvakadarika ichienda muzvichauya). Dzimwe nguva tinotaura pamusoro payo sepepaipi yenguva (tinoiti paipi nekuti inofanana nemafambiro emvura mupombi haidzokere shure inoenda rutivi rumwechete). Kuti tinokwanisa kurangarira nguva iri chidziro chepaipi risingaonekwi rinopoteredza nzvimbo yedu ine zvimiro zvitatu hurefu hupambi nekureba ichikwira kudenga.
Nzvimbo yechishanu ndiyo nzvimbo yeMweya yezvakanaka nezvakaipa. Mweya yedu sevanhu inogara ichifambidzana nenzvimbo iyi sezvo tinofanira kuita sarudzo pakati pechakanaka nechakaipa nguva dzose.
Iyi ndiyo nzvimbo zvakare inoenda mweya yevakarasika pavanofa sezvo ichigarwa naSatani nemadhimoni ake.
Nzvimbo yechitanhatu ndiko kuDenga kana kuti Denga reMatenga kunogara vatumwa ngirozi dzaMwari.
Takadzivirirwa kubva pakunzwanana nenzvimbo yechitanhatu iyi Denga nekuda kwenzvimbo yechishanu yakatipoteredza. Saka basa reBhaibheri nderekutsanangura kwatiri kuti Mwari akauya sei panyika kuzotiitira nzira yekupunyuka kuti tidarike nzvimbo dzevakarasika (nzvimbo yechishanu) tonanga kuDenga (nzvimbo yechitanhatu) patinofa.
JOHANE 14:6 JesuJesu akati kwaari: Ndini nzira, nezvokwadi, novupenyu;
Jesu ndiye nzira yatinodarika nayo gehena.
Mwari ari pamusoro pazvo zvese sekunge anogara munzvimbo yechinomwe isingafungirike yenzvimbo.
Pakutanga, zvisinei nekuti aive rini, Mwari akataura akazvisikira Muviri weMweya. Akabva asika Denga akazviisira muganhu kuti agare ikoko kuti ngirozi dzimuone paaidzisika. Muviri-weShoko uyu waaigara mauri wakazivisa Mwari munzvimbo dzedenga. (Uri mweya usingaonekwe. Muviri wako ndiwo wakafukidza mweya wako. Saka muviri wako unogara newe uye nenguva imwechete ndiwo iwe. Asi njere dzako dzinova mweya ndidzo dzinotonga muviri uye dzakakura kukunda muviri.)
VAROMA 8:27 Uyo unonzvera moyo, ndiye unoziva kufunga kwoMweya, nokuti unonyengeterera vatsvene sezvinoda Mwari.
VAEFESO 4:23 muvandudzwe mumweya wokurangarira kwenyu,
“Mweya” ne “ndangariro” zvakashandiswa zvichishandidzana. Saka chinhu chimwe. Hatizivi kuti “mweya” chii asi tinoziva kuti tine mweya mumiviri yedu unotiita kuti tirambe tichirarama. Mweya ndiwo wakaita sababa, muviri ndiwo wakaita semwanakomana. Mweya kana ndangariro dzinoudza muviri zvekuita.
JOHANE 1:2 ... Ireri pakutanga rakanga riri kunaMwari.
Saka Mwari akada kuuya pasi pachidanho chatiri kuti tigone kumuona.
Chinhu chekutanga chaive chekuzviisira muganhu muMuviri weMweya unonzi Shoko. Mwari aizogara muShoko rake.
Mwari aifanira kuzviisira miganhu nguva zhinji kuti agare kuDenga. Hukuru hwaMwari hwakadzama zvisingatsanangurike. Zvisinei kuti tingafunge zvakakura sei, anoramba ari mukuru.
MAPISAREMA 113:6 Iye anozvidukupisa kuti aone Zviri kudenga napasi?
Ndangariro dzaMwari asingaonekwi dzaizotaurwa nezvadzo saBaba. Ndangariro idzi dzaizoziviswa kupfurikidza Shoko rake, raizodaidzwa kuti mwanakomana.
Ndangariro dzedu dzinosvika pakadzama zvakanyanya kukunda mashoko atinoshandisa kudziburitsa pachena.
JOHANE 1:3 Zvinhu zvose zvakaitwa naye; kunze kwake hakuna kuitwa kunyange chinhu chimwe chakaitwa.
Mwari akasarudza kutaura kusika kwake kuti kuvepo. Akashandisa muviri wake weShoko kuti ataure mashoko ekusika.
Muromo wake weMuviri wake weMweya ndiwo wakataura mashoko ese aidiwa pakusika zvinhu zvese.
Neimwe nzira maive nesimba guru mumanzwi aakataura nekuti akava simba nezvinhu zvinobatika. Kusika kukuru zvekuti hatikwanisi kukunzwisisa. Murairo mukuru munezveSainzi murairo wekuchengetedza simba. Unotaura kuti simba harigoni kusikwa kana kuparadzwa. Hakuna munhu wezveSainzi akambosika simba. VeSainzi havagoni kusika chinhu kubva pasina. Asi Mwari akaratidza kuti aive pamusoro uye mukuru pamirairo yeSainzi nekuti akasika simba kubva pasina neMweya wake unoshamisa. Hakuna munhu akabvira ambogona kuita izvi. Mwari ega ndiye anogona kusika. Haana kungosika simba nezvinhu zvinobatika zvedenga nenyika asi akasikawo mirairo yakanakisa uye inodakadza yefizikisi inotonga nyika nezviri mairi.
Sainzi hadzigoni kusika simba. Havanawo ruzivo kana gwara rekuti mirairo yeSainzi yakabva kupi. Evangeri raJohane rinoratidza kuti Jesu akabva munzvimbo yepamusoro - soro kwazvo sezvo akaita zvinhu zvisingagonekwi nevanhu asina kana kuzvitambudzikira.
VeSainzi vanoti kuputika kweBig Bang (zvisinei nekuti chaive chii uye kuti chakaputika sei chinhu chakavanzika chisina kubvira chazodzokororwa. Sainzi dzakanaka dzinofanira kudzokororeka.) kuputika uku kwaifanira kusika simba rese mudenga nenyika. Izvi zvinorwisana nemurairo wefizikisi une simba kwazvo unova murairo wekutanga wethermodhainamikisi. Unotaura kuti simba harigoni kusikwa kubva pasina. Saka tsananguro yeBig Bang inotanga nekurwisa murairo wekutanga une simba kwazvo wefizikisi. Hakusi kutanga kwakanaka.
Kanganwai kutaura kwenhema pamusoro pekusika kunoitwa nevesainzi. Matambudziko enyu anoda simba revanhu kuti vamagadzirise here? Zvino Jesu ndiye munhu wamunofanira kutaura naye. Ndiye akaita zvinhu zvese zvisingatsananguriki mudenga nenyika. Matambudziko makuru atiinawo iwe neni maduku kwazvo kana zvichienzaniswa nehunyanzvi hwake hwekusika. Tinongofanira kudzidza kuti toisa sei matambudziko edu kwaari. Kuita uku kunodaidzwa kuti kutenda.
Saka Johane anozivisa Jesu saMwari akasika isu tese anokwanisawo kukurira murairo wemamiriro ezvinhu munzvimbo dzatigere zvakadaro oshandura zviitiko zvinenge zvichida kutikurira. Pakawa masvingo makuru eJeriko nemweya umoshamisa, chikamu chawo chimwechete chakaramba chakamira. Rakabi chifeve aigaramo. Airarama hupenyu hwakaipa asi achibva asarudza kutenda muna Mwari wevaJuda. Ndiko kuita kwesimba rekutenda kuti mukuipa nekukura kwekuparadzwa kweguta guru, chikamu chechidziro chake chakasara chakamira chisina kuparadzwa. Mwari akaita seGondo ndizvo zvinotaura Johane, nemuono wakapinza kusvika chero pachinhu chiduku akachengetedza munhu mumwechete nemhuri yake mukuparadzwa kweguta reJeriko kunotyisa. Mwari uyu akafanira kuzivikwanwa.
MAPISAREMA 91:7 Kurutivi rwako kuchawa vane gumi ramazana, Nezana ramazana paruoko rwako rworudyi; Asi hazvingaswederi kwauri.
Shoko raMwari rakadavira kutenda kwaRakabi rikava ruchengetedzo rwakanakisa kwaari.
JOHANE 1:4 Vupenyu bwaiva maari: vupenyu bwaiva chiedza chavanhu.
Asi mweya usingaonekwi uri mumiviri yedu wakakura kudarika ndangariro chete, uye kukunda mifungo. Hupenyuwo zvakare. Hatina ruzivo kuti hupenyu chii sezvo huchibva kunzvimbo yekumusoro zvakanyanya.
Hupenyu hunorarama Mwari muMuviri weShoko ndiwo wega muenzaniso wakanaka unobata ndangariro dzevarume nevakadzi kuti vagone kurarama hupenyu hwavo senzvimbo inogara vanhu kana kuti mudzimhuri, dzinoteerera Shoko raMwari zvakazara.
MABASA 2:44 Navaitenda vose vaiva pamwe chete, vakati zvinhu zvose ndezvavose;
45 Vakatengesa fuma yavo nenhumbi, vakagovana navose, mumwe nomumwe paakashaiwa napo.
Kereke yekutanga yaive nevanhu vane rudo uye vanopanana. Tingagone here asi kudzoserwa kumuenzaniso wavakasiya?
Vanhu vanoshandiswa naMwari vanorarama hupenyu hwavo nenzira inotarisira kugadzikika kwevanhu. Rudo rwaMwari kuvanhu vose, munhu mumwechete kana chikwata, runoratidzwa nemunhu mumwe nemumwe waanosarudza.
Muenzaniso mukuru waive Jesu. Aimiririra Mwari achiuya panyika kubva munzvimbo dzepamusoro dzeMweya kubva muMuviri weMweya kupinda muMuviri wenyama. Muna Jesu, Mwari asingaonekwe aiuya kuti ave pachidanho chevanhu.
VAKOROSE 2:8 .... Kristu.
Mweya waMwari wese waigara muna Jesu. Munhu Jesu, aive kunze kwaMwari, aizorarama hupenyu hwaizotiratidza kuti Mwari akaita sei dai aive munhu.
JOHANE 1:5 Chiedza chinovhenekera murima; asi rima harina kuchikunda.
Jesu aive akanakisa. Vanhu havana kukwanisa kurarama saye. “Idai vavengi venyu”. “Ipa rimwe dama”. “Zvakaropafadzwa kupa pane kugamuchira”.
Hazvigoni! “Ndinozvida zvose uye ndinozvida izvozvi”, ndiko kutaura kunoita rwiyo rune mbiri. Muimbi uyu akafa nemukondombera. Kuwana zvese hazvina kumubatsira.
Kuzadzwa nerima remukati rekuvenga vavengi vedu, kudavira kuzvinhu zvakaipa nechido chekutsiva, uye kuva nemakaro uye kuzvifungira iwe woga, vanhu venguva yake havana kugona kurarama nechiedza chaibwinya chakadai. Huvepo hwake hwakaburitsa pachena kutadza nezvivi zvevanhu. Vanhu vaive vakazadzwa nezvivi vaingove nerudo rwekuita chinhu chimwechete kwaive kuedza kudzima chiedza chaibwinya ichi sezvo rima harigare pane chiedza. Saka vatungamiri vemaJuda vakaedza kasingaperi kumupomera zvizhinji nekuti aiburitsa pachena kutadza kwavo. (Pafungei kuti aizoti kudii kuvafundisi vedu vanongofunga nezvavo chete vanoda kuzviunganidzira mari yese nezvipo zvinouya mukereke, kana akadzoka nhasi?)
Messiasi aiuya sezvakavimbiswa asi vakuru vezvitendero vechiJuda vemazuva iwayo vakamuramba. Chiedza nerima hazvigari pamwechete. Panofanira kuita chimwe chazvo panzvimbo, kwete zvese panguva imwechete. Pavakapiwa mukana vakasarudza Baraba, mhondi, pachinzvimbo chaJesu mupi wevupenyu anomutsa vakafa.
JOHANE 1:6 Kwakanga kunomunhu wakatumwa naMwari, zita rake rainzi Johane.
Mwari aive nemunhu mumwechete aikwanisa kumira muchiedza chaJesu Kristu. Muprofita akakurira murenje kure nekurudziro yevakuru vechitendero vechiJuda vaive nehuwori. Kure nevanhu vakaipa vane makaro vezvitendero vaive vakazadzwa nerudo rwekuda kupfuma uye kuzviruramisira. (Chimiro chemakereke edu mazuvano chiri kun’oresa vanhu zvakadii?)
JOHANE 1:7 Iye wakavuya kuzopupura, kuti apupurire chiedza, kuti vose vatende naye.
Johane akauya kuzoudza vanhu nezvaJesu. Johane aive asati amboona Jesu. Asi iye Johane ega ndiye aikwanisa kunongedza Messiasi aive Munhu aifamba pakati pevanhu. Vanhu, kana vaida kuwana Messiasi, vaifanira kutarisa rutivi rwainongedzerwa naJohane. Vanhu vaisagona kuzvisarudzira Messiasi wavo wavaida. Vakagumbuka pakauya Messiasi asingabvi mumasangano ezvitendero zvavo. Vakazogumbuka zvakawedzerwa pakatukwa vatungamiri vezvitendero zvavo naMessiasi.
Asi vaive vayambirwa nekuti Johane aive ambotukawo vatungamiri vezvitendero. Akavadaidza kuti nyoka. Nyoka dzine huturu hwakaipa.
Saka muprofita haanongedzeri vanhu kuungano yavo kana kumukuru wavo. Anovanongedzerera kure kusiri kune maonero avanoita pamusoro pezvechitendero.
Pakuuya kwake kwekutanga, Johane akanongedzera Jesu paaifamba pakati pevanhu.
Kuuya kwake kwechipiri kusati kwasvika, William Branham anonongedzera Jesu paanofamba nemapeji eBhaibheri saka zvinobva zvatibatsira kuti tinzwisise zvakavanzika zveMagwaro.
JOHANE 1:8 Uyo wakanga asati ari icho chiedza, asi wakatumwa kuti apupurire chiedza.
Johane aive chiedza chakajeka chechokwadi sezvo aitevera nekutaura zvakanyorwa muMagwaro uye aiziva nzvimbo yake muhurongwa hwemweya semukuri wenzira yekuuya kwaJesu kwekutanga. Akakatyamadza vanhu munguva duku yehushumiri hwake hwaive nesimba. Asi vanhu vanokurudzirika zviri nyore kukudza vanhu nekunamata maprofita makuru, sezvakaitika apo Nebuchadnezzari akatumidza Danieri zita ramwari wake Belteshazzari.
Saka Evangeri raJohane rakanangana nekutaura kuti muprofita akakura nzira yekuuya kwaJesu, haasi chiedza. Jesu Ega ndiye Chiedza. Jesu ndiye Shoko. Hakuna muprofita wanhasi anokwanisa nechero nzira kutsiva Shoko. Hakuna zvakataurwa nemuprofita zvinokwanisa kukura kukunda Shoko. (Vafundisi veMharidzo ndapota batai izvi.)
JOHANE 1:9 Ichi chaiva chiedza chazvokwadi, chinovhenekera munhu mumwe nomumwe pakusvika kwacho panyika.
Jesu Shoko raMwari ndiye ega chiedza chechokwadi. Shoko raMwari rinopa hutungamiri kuvanhu muhupenyu hwavo umwe neumwe (tumadziva twavo tuduku twezvido zvavo unova mufananidzo mudiki wehupenyu) zvese nenguva yekereke yavanenge vachirarama vari (hurongwa hwaMwari mufananidzo mukuru unoyerera seRwizi rweHupenyu mukati memakore 2 000 enhorondo yekereke zvakare nemukati memapeji eBhaibheri).
Gamuchirai Jesu saShe nemuponesi wenyu. Zvinobva zvareva kuti muri mudziyo waanenge asarudza. Raramai muHutsvene. Zvinoreva kuti ari kukusukai. Moparidzira nekubatsira vamwe vasati vamuziva mogamuchira rubapatidzo rweMweya Mutsvene. Izvi zvinoreva kuti anokuzadzai. Ipapo munenge makwanira nekuvepo kuti Mwari akushandisei. Apa munenge makukwanisa kutungamirirwa naMwari achikuburitsai mukadziva kaduku kezvido zvenyu zvenyama uye zvamunoda zvese kuti murarame.
Kubva apa Mwari anokwanisa kutanga kukushandisai kana mukamutendera kubvisa zvido zvenyu zvenyama okuisai murwizi runoyerera rwekuda kwake kwakanaka, Muono wake Mukuru. Mumwe munhu watingade kufanana naye ndiSimoni wekuSairini akamanikidzwa kutakura muchinjikwa zvisiri muhurongwa hwake asi akaita kuda kwaMwari mukanguvana. Tinowanzoona kuti kuda kwaMwari kunorema sezvo kwakasiyana zvakanyanya nekuda kwedu, kunotsvaga kuzviwanira isu, magarikwa, uye kuchengetedzeka.
ISAYA 55:8 Nokuti ndangariro dzangu hadzizi ndangariro dzenyu , nenzira dzenyu hadzisi nzira dzangu-ndizvo zvinotaura JEHOVA.
Kuda kwaMwari kunobvisa hutefetefe kune vari mahuri. Kunotidzidzisa kutarisira zvisingatarisiriki. Tinofanira kurasa zvatakadzidza todzidza zvitsva. Kana tikapesana nehupenyu hwedu hwatakaronga, tinowana chinangwa chaMwari kuhupenyu hwedu. Nzira yekuenda pamusoro kuzvideredza. Kukundikana kwedu panyama kunodyara mbeu yekubudirira pamweya. Nzira dzaMwari dzakasiyana kwazvo nenzira dzedu. Tinoshandiswa semidziyo kubatira vamwe kwete kuda kwedu.
JOHANE 1:10 Wakanga ari panyika, asi nyika haina kumuziva.
Mweya waMwari usingonekwe wakazvideredza kusvika pakuva chisikwakwa chaakasika paakauya kuzogara muMuviri waJesu. Asi akauya nekuzvininipisa. Akaberekwa nemhandara muchidyiro chainhuwa. Aive nenhorondo yakaipa sekuti aive aita mimba asati awanikwa. Saka Jesu aionekwa nevazhinji semwana akaberekerwa muhupombwe. Nazareta raive guta duku raizivikanwa nehunhu hwakaipa.
JOHANE 1:46 Natanaeri akati kwaari: Kune chinhu chakanaka chingabva Nazareta here? Firipo akati kwaari: Vuya uvone.
Josefa aive muvezi aisazivikanwa aive asina mbiri.
Saka Jesu akapinda panyika asina mikana inobva pakuberekwa kwake. Saka nyika yakamufuratira nekuti vaitarisira kuti Musiki achave munhu ane mbiri ane vateveri vazhinji nevatumwa pamwe naye.
JOHANE 1:11 Wakavuya kunezvake, asi vanhu vake havana kumugamuchira.
Akauya kumaJuda, vana vaAbrahama, vaigara munyika yeIsraeri yaive yavimbiswa kuna Abrahama naMwari. Akauya akazadzisa kuprofitwa kwakaitwa pamusoro paMessiasi. Asi akauya nenzira yakaninipa uye yakaderera kwazvo, achifamba nemanyatera achitasva mbongoro. Kutaura pamusoro peMunhu pasina.
Madzimambo ekuRoma aitasva mabhiza ane simba kwazvo vachifamba nemauto avo aive akapakata zvombo. Vaitaridzika zvinoyevedza.
JOHANE 1:12 Asi vose vakamugamuchira, wakavapa simba kuti vave vana vaMwari, ivavo vanotenda kuzita rake;
Mwari aizivikanwa nezita rekuti Jehova (nemamwe mazita mazhinji aitsanangura humwe hunhu hwake) muTestamente Yekare paaigara Kudenga, pamusoro pemaJuda.
Mwari akabva auya panyika ari mukati meMunhu Jesu kuzogara nemaJuda. Mwari anesu. Emanuere.
Saka Mwari akabva atora zita remunhu, Jesu Kristu.
Kekutanga Mwari akava neRopa mutsinga dzeMuviri wenyama waairarama mauri raizodeurwa kuti zvivi zvenyika zviregererwe. Saka Zita remunhu Jesu ndiro rega rinogona kutiponesa. Saka Mwari haana kuzozvidaidza kuti Jehova zvakare. Zita rekuti Jehova rakashanda muTestamente Yekare harina kuzotaurwa zvakare muTestamente Itsva.
Mwari aive ava Munhu. Hama musununguri. Zita raJesu ndiro rega Zita raipa ruponeso nekusukwa kubva kuzvivi kupfurikidza neRopa rake.
Hukama hwaMwari nevanhu hwaive hwenyasha, zvinoreva kuti kuitirwa zvakanaka kwatisina kufanira kana kushandira kuti tiwane. Kunopiwa pachena kuchitambirwa nekutenda kukuru, mukutenda.
Hukama hwemunhu naMwari huri mukutenda chete, nekutenda kukuru kwekuti Mwari vachaita zvose zvinoda kuitwa kuti tiponeswe. Hatigoni kuzviponesa nechero nzira. Tinotenda mukutenda kuti Jesu ndiye anogona kutiponesa.
Vanhu vanokwanisa kutendeuka kubva muzvivi zvavo vogamuchira chipiriso chikuru chisingdi muripo chekuripira zvivi zvavo, vanopiwa simba muna Mwari. Ropa rake rinosuka zvivi zvedu uye Hupenyu hwaive muRopa rake, Mweya Mutsvene mukuru, unobva wauya kuzogara matiri sezvo tinenge tazvarwa patsva muMweya. Hupenyu hwake matiri hunotiita zvisikwa zvitsva.
Ndangariro dzedu itsva, kwete miviri yedu, dzinenge dzaitwa mumufananidzo waMwari, unova Mweya kwete Munhu wenyama.
JOHANE 1:13 Avo vasina kuberekwa, neropa kana nokuda kwenyama. Kana nokuda kwomurume, asi naMwari.
Ropa riri munhengo yemurume rinokonzeresa kumira kwenhengo yake zvoita kuti aite bonde. Humhandara hwemukadzi hunodamburwa pakuita uku. Hupenyu huri mumbeu yemurume hunobva hwapfekedzwa nyama mukati memimba yemukadzi. Hupenyu hwemunhu uhu kana kuti mwana anokura kuseri kwehumhandara hwakaputsika. Saka panobuda hupenyu hwerufu. Hakuna munhu akabarwa nemukadzi akabvira ararama chiuru chemakore.
GENESISI 2:17 Asi muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa usaudya; nokuti nomusi waunoudya, uchafa zvirokwa­zvo."
Miti yemichero yese yakanzi yakanaka pazuva rechitatu rakaiswa hupenyu panyika naMwari.
13 Madeko akavapo namangwa­nani akavapo zuva retatu.
Hakuna muchero unoberekwa mumuti wakarambidzwa kudyiwa.
Saka “muchero wakarambidzwa” waive chii?
“Kuzivana kwemurume nemukadzi” ndiko kudaidzwa kunoitwa kusangana pabonde pamurairo.
Kusangana pabonde ndicho chega chinhu chinoitwa nevanhu chakanaka uyezve chakaipa. Chakaipa kunze kwewanano, kunyange zuva rimwe vanhu musati machata. Zvino chinobva chava chinhu chakanaka pakarepo kana machata.
Kuberekwa kubva kuseri kwehumhandara hwemukadzi hwakaputsika, tinowana hupenyu hunofa. Humbowo hweizvi ivanga riri padumbu redu, guvhu. Chiratidzo chechikara pamiviri yedu. Zvinoreva kuti tichapedzisira tapindawo muguva rinova vanga pachiso chenyika.
Chiratidzo chechikara pandangariro dzedu, chinotiita kuti tifuratire Jesu neBhaibheri, chichatumira mweya yedu kugungwa remoto.
II PETRO 3:8 Asi vadikanwa, musakanganwa chinhu chimwe ichi, kuti kunaShe zuva rimwe rakaita samakore anechuru, namakore anechuru, sezuva rimwe
Hakuna munhu akabvira akwanisa kurarama makore 1 000. metusera ndiye akararama kukunda vanhu vose, akararama makore 969.
Saka munhu wese, anozvarwa nekusangana pabonde, akapikirwa kuzofa.
Asi Johane akabva azivisa Jesu saMwari wemasimba ose iye ega anokwanisa kukunda zvese zvinounzwa nezvivi uye rufu.
Hupenyu husingagumi hunofanira kuuya nenzira yakasiyana zvachose. Muviri waJesu wakaberekwa nemhandara Maria. Paive pasina kusangana pabonde kwakaitika.
MATEO 1:20 Zvino wakati acharangarira izvozvo, tarira mutumwa washe akazviratidza kwaari pakurota akati, Josefa mwanakomana waDhavhidhi, usatya kutora Maria, mukadzi wako, nokuti icho chakagamuchidzwa mukati make ndechoMweya Mutsvene.
Chero munhu anoisa mbeu yehupenyu mumimba yomukadzi ndiye baba vemwana iyeye. Saka Mweya Mutsvene ndiwo Baba vaJesu.
Zvose zviri Mwari zvinorarama mumuviri weMunhu Jesu Kristu.
Saka Jesu, munhu wekutanga asina chivi kubva pakatadza Adamu, haana chivi saka aisafanira kufa.
JOHANE1:14 Shoko rakazova nyama, rikagara pakati pedu, (tikavona kubwinya kwake, kubwinya soko wakaberekwa mumwe chete wababa,) azere nenyasha nezvokwadi.
Shoko raMwari, rakasika zvese, raive rasika muviri wemunhu kuti Mwari agare mauri.
Mwari akava mumwe wedu. Aive iye oga Munhu akarurama. Hatigoni kuona Mwari asingaonekwe anogara muna Jesu, asi kubva pakuita kwake uye kutaura kwake tinokwanisa kuona kuti Mweya waive maari waive wani.
Akakurudzira vanhu kuti vatendeuke. Akaponesa varwere. Akamutsa vakafa. Akaita minana. Mwari ega ndiye anokwanisa kuita izvi.
Aiudzawo vanhu zvaive mundangariro dzavo. Ndicho chaive chiratidzo chaMessiasi.
II MAKORONIKE 6:30 Inzwai henyu iko kudenga kwamunogara, mukanganwire muripire mumwe nomumwe zvakafanira mafambiro ake ose, iye wamunoziva moyo wake; (nokuti imi, imi moga, ndimi munoziva moyo yavana vavanhu vose;)
JOHANE 1:15 Johane akamupupurira, akadanidzira, achiti: Uyu, ndiye wandaireva ndichiti;uyu unouya shure kwangu wakavapo mberi kwangu; nokuti wakanditangira.
Johane Mubapatidzi aive muprofita anoshamisa. Semurume wedemo wemweya aitema zvido zvevakuru vezvitendero uye kuparadza masangano ezvitendero zvemazuva iwayo vaifunga kuti “makereke” avo uye vakuru vezvitendero zvavo vaivaudza chokwadi. Ainongedzera kunaJesu chete. Kwete kuvatungamiri vezvitendero kana magungano. (Chingofungai kuti angataure kuti kudii kana akataura nevatungamiri vemakereke nhasi. Ndanzwa shoko rekuti “nyoka” here? O hongu huturu pasi pendimi dzenyu?)
Semuprofita mukuru wemazuva iwayo angadai akazvitutumadza nekukosha kwake uye hushumiri hwake, zvichienzaniswa nevamwe vanhu. Asi akaisa muenzaniso unodakadza. Pachinzvimbo chekutarisa kuti aibata sei pamusoro pevamwe vanhu (izvo zvaakaita pachokwadi) akazvienzanisa naJesu akaona kuti aive ari munhu pasina. Chinangwa chake chese chaive chekugadzirira nzira yaJesu. Aifanira kunongedzera Jesu nekumuzivisa kuvanhu, zvino Johane Mubapatidzi aifanira kuzobva munzira kuti vanhu vatevere Jesu.
(Vafundisi veMharidzo vanoramba vachisimudzira hama Branham ndapota dzidzai).
Muprofita Johane aive chikwangwani. Jesu ndiye aive nzvimbo yaiperera rwendo. Kana ukangogumira pachikwangwani unenge usina kusvika kwaunenge uchienda.
Muprofita anongozadzisa chikamu cheMagwaro. Jesu ndiye Magwaro acho ese.
Johane Mubapatidzi akatanga kubata basa muna 30 AD akabata kwemwedzi inenge mitanhati uye aive munhu akakosha kwazvo pabasa rake. Asi mupostora Johane aive atonyora kare kuti Jesu aive agara aripo kubva pakutanga, kubva kare katingakwanise kufunga isu vanhu. Saka Jesu akakunda Johane Mubapatidzi nekure. Mavhesi mashoma eBhaibheri anonongedza kuna Johane Mubapatidzi. Asi Bhaibheri rese rinonongedza kuna Jesu, kana tikangoziva kuti tingaturikira sei mavhesi acho.
Jesu akakura kukunda maprofita makuru ese. (Vanotenda kuMharidzo ndapota dzidzai).
JOHANE 1:16 Nokuti pakuzara kwake isu tose takapiwa nyasha pamusoro penyasha.
Jesu akanongedzwa nekuziviswa kuvanhu naJohane Mubapatidzi seMunhu aifamba pakati pevanhu. Mupostora Johane akanyora kuti hataifanira kugamuchira Johane Mubapatidzi, mukuri wenzira mukuru. Isu takagamuchira Jesu waakazivisa kunyika. Johane akanyangarika kuzara kwaJesu pakwakatora hushe panyika.
Jesu anopa zvinogona kutaurwa naJohane chete, dzikinuro.
Johane anotiudza kuti titendeuke. Asi Jesu anoita kuti kutendeuka kwedu kushande. Jesu akafa, akadeura Ropa rake kuti zvivi zvedu zvisukwe. Ipapo Mweya waKristu wakabva wauya kuzogara matiri. Nendangariro dzaKristu matiri tine muono mutsva pamusoro penyika nematambudziko ayo. NeMweya waKristu mukati medu ndiye anorwa hondo dzedu.
Johane aikwanisa kutaura pamusoro peizvi zvose. Asi Jesu ega ndiye akasangana nekutambudzika kwese kuti ruponeso rwedu ruzadziswe. Saka nyasha dzaMwari kwatiri dzinoratidzwa mukutambudzwa kwaJesu nekuda kwedu. Saka kune nyasha dzakapetwa nekuti Jesu chete ndiye anogona kutipa kutenda kuti titende kuzano reEvangeri yake.
Saka Jesu akatifira akabva azopinda mumoyo yedu kuti atipe hupenyu hutsva ndiye mukuru kwazvo uye akakosha kudarika Johane Mubapatidzi akagona chete kutizivisa Jesu nekutiudza nezvake. Jesu ega ndiye anogona kuita kuti ruponeso nekuzvarwa patsva zvivepo. Saka ndiye weKutanga. Angava Johane kana mumwewo muprofita hapana anokwanisa kukwikwidza naJesu.
JOHANE 1:17 Nokuti murairo wakapiwa naMosesi, asi nyasha nezvokwadi zvakavuya naJesu Kristu
Mosesi aive muprofita mukuru kwazvo wemurairo. Munhu akatendeka watinotarisa neruremekedzo. Asi aivewo munhu wekutanga kuputsa murairo yese ine gumi paakaikandira pasi dombo rayaive yakanyorwa akariputsa. Izvi zvinoratidza hunhu hwemunhu. Kusasimba kwemunhu uye zvido zvemunhu kune rumwe rutivi asiwo kuine zviitiko zvakaita sekuzarurwa kweGungwa Dzvuku paaive achiita kuda kwaMwari kwakanaka.
Mupostora Johane akauya kuzotara mutsetse wekupatsanura zvinhu. Aitaura pamusoro pemuprofita mukurusa weTestamente yekare akanyora Bhuku rekutanga rinoshamisa achitizivisa kuna Mwari. Murume akatipa murairo waizotitungamirira kui tisvike kuna Mwari. Asi kuneta kwevanhu hakuna kukwanisa kuchengeta Murairo. Vatungamiri vezvitendero vechiJuda vaizvikudza, vaive nenzara yesimba uye vaive nemakaro, vakaisa vanhu kutsananguro dzavo dzavanoda pakuturikira zvakarehwa nemuprofita Mosesi.
MATEO 23:2 Akati: Vanyori navaFarise vagere pachigaro chaMosesi,
Vakuru vezvitendero vakawana kutonga kwavo (kunomiririrwa nechigaro) kupfurikidza kutaura kuti, “Muprofita Mosesi akati ....”, “Muprofita akati ....” , “Muprofita akati ....”
Izvi zvinonzwika sezvinhu zvisiri zvitsva here?
Vakuru vezvitendero vanobva vashandisa zvakataurwa nemuprofita Mosesi kuti vapikise nekuramba Jesu, Shoko.
Makereke eMharidzo nhasi uno anovimba nemazwi avakabata paitaura vanhu apo Shoko rakanyorwa rakarambwa rakamira panze pamusuwo pekereke.
Saka muprofita Johane akabva atara mutsetse. Muprofita Mosesi akauya neMurairo asi nyasha nechokwadzi cheShoko (chinova Jesu) zvakakosha kudarika chero muprofita upi zvake. Maprofita akaita saMosesi, vane miganhu yavo nekukanganisa kwavo asi hakuna muganhu kunyasha dzaMwari kana kuChokwadi cheBhaibheri.
Murairo unokwanisa chete kubata pakuraya sezvo hwaro hwawo hwaive huri pamusoro kwazvo pekuti vanhu vagone kuuchengeta. Saka Jesu akapinda neEvangeri renyasha rakakosha kukunda murairo. Murairo unoraya, asi nyasha dzinoponesa. Murairo haugoni kubvisa rudo rwekutadza. Nyasha dzinounza hunhu hwekuzvarwa patsva hunoshandura moyo hwobvisa rudo rwekuita zvivi.
Zvakare Jesu ari pakukunda sezvo amire pamusoro-soro pemuprofita mukurusa weTestamente Yekare Mosesi. Asi Mosesi, akabata tsvimbo yehufudzi, akaparadza hondo hurusa yenguva yake. Ichi chaive chimwe chinhu chikuru.
Asi zvakadaro pakupedzisira muvengi mukuru, rufu, akatora Mosesi.
Asi Jesu, akabata muchinjikwa akashonga korona yeminzwa mukuneta kwenyama yake yemunhu, akaparadza mubatanidzwa mukurusa wemadhimoni nevakaipa vaive vakaunganidzwa munzvimbo imwechete. Satani akangogona kuzvivanza neshungu sezvo panguva iyi aive akundwa zvakanakisa. Jesu akabva amuka musi weSvondo mangwanani akunda Zvivi, Rufu, Hadhesi, uye guva. Kukunda uku kwakabva kwadzikatira zvose zvaive zvakundwa naMosesi. Jesu akakunda rufu rwaive rwakunda Mosesi. Mosesi neGungwa Dzvuku zvava nhorondo. Jesu pamuchinjikwa haasi angori chikamu chenhorondo asi chichiri chiitiko chichiri kushandura hupenyu hwedu nhasi kana tikaita nyasha dzekugamuchira nekutenda zvaakatiitira. Nekuti nyasha dzake dzinotipa kupona pachena pasina muripo. Ichi ndicho chokwadi chakaza.
JOHANE 1:18 Hakunomunhu wakatongovona Mwari; chero nguva ipi; mwanakomana wakaberekwa mumwe woga, ari pachifuva chaBaba, ndiye wakamuzivisa isu.
Dambudziko ratinaro isu vanhu venyama naMwari nderekuti hatikwanisi kumuona. Vanhu havagoni kuona Mweya uye Mwari ndiMweya.
Saka Mwari Baba, Mweya unogara nekusingaperi, wakagara mukati memuviri weMunhu Jesu, Mwanakomana waMwari. Mwanakomana mumwechete ega zvinoreva kuti Mwari akaita Munhu mumwechete chete maari maikwanisa kurarama kuzara kwehuMwari. Hakuchazoiti mumwe munhu akafanana naJesu.
Johane Mubapatidzi akarova Israeri sedutu remvura yemweya. Akamhura masangano ezvitendero nevatungamiri vawo. (vakuru vemakereke dzidzai). Akayambira pamusoro pekuuya kwaMessiasi. MaJuda akabva atyiswa kwazvo. Aive nekumanikidza kunopinza kwakazadza vateereri vake. Aitaura nesimba. Haana kubvira atsvaga mbiri saka vamiririri vakabva vatumwa kwaari kuti vabvunze kuti aive ani.
JOHANE 1:20 Akatenda pachena, haana kuramba, akatenda pachena, achiti: Handizi Kristu.
Kristu zvinoreva kuti “wakazodzwa”. Johane Mubapatidzi aive neMweya mutsvene maari kubva mudumbu mamai vake. Saka akapupura kuti aive akazodzwa. Aisakwanisa kuzviramba.
Asi nekukasika akabva atsanangura kuti aive asiri Kristu.
Aiziva kuti aisafanira kunypedzira kuva akaenzana naJesu nechero nzira.
Mumaziso maJohane, Jesu akanga ari weKutanga.
JOHANE 1:21 Vakamubvunza, vachiti: Asi kudiniko? Ndiwe Eria here? Akati: Handizi iye. Ko uri uya muporofita here? Akapindura, akati: Kwete,
Zvino kunobva kwauya mubvunzo unorasisa unoburitsa pachena kuti Johane aiziva zvakadii pamusoro pehushumiri hwake.
“Ndiwe Eria here?” (ChiGiriki chezita rekuti Erija). Akabva ati “kwete”.
Asi Jesu akati aive Eria.
MATEO 17:12 Asi ndinoti kwamuri: Eria wakatosvika, asi havana kumuziva; asi vakamuitira pavakada napo. Saizvozvo vo Mwanakomana womunhu uchabva watambudzwa navo.
13 Zvino vadzidzi vakanzwisisa kuti waivaudza zvaJohane Mubapatidzi.
Tingatsanangure sei kuti aive asiri Eria asi iye aive Eira?
MARAKI 4:5 "Tarirai, ndichakutumirai muporofita Eria, zuva iro guru raJehovha, rinotyisa, risati rasvika.
6 Iye achadzorera mwoyo yamadzibaba kuvana, nemwoyo yavana kuna madzibaba avo, kuti ndirege kuuya ndirove nyika nokutuka."
Eria aifanira kuita zvinhu zviviri. Anofanira kudzorera moyo yemadzibaba kuvana uye yevana kumadzibaba.
Johane Mubapatidzi akaita chikamu chekutanga chete.
RUKA 1:17 Uchafamba pamberi pake noMweya nesimba raEria, kuti adzorere moyo yamadzibaba kuvana navasingateereri kuvuchenjeri bwakarurama agadzirire Ishe, vanhu vakamugadzirirwa kwazvo
Madzibaba echiJuda asingateereri aikwikwidza, akamira patsika yeMurairo, vaifanira kudzoserwa kuvana naJohane Mubapatidzi, zera revaduku raJesu nevadzidzi vake vaive nechokwadi cheTestamente Itsva.
Ndicho chikonzero nei Jesu akati Johane Mubapatidzi aive Eria (chiGiriki chinoreva kuti Erija).
Asi kwaive nechikamu chechipiri chechakavanzika ichi. Vadzidzi vaizova madzibaba ekereke yekutanga. Kwozova nekurasika kubva pachokwadi muNguva yerima kubva makore ana 325 AD kusvika 1520AD. Martin Luther kuGermany aizodzosa Ruponeso kubva pakutenda chete. Makore akapoteredza 1750 AD John Wesley kuEngland aizodzosa hutsvene nekuparidzira zvakazounza nguva huru yemamishinari. Zvino muna 1906 vePentecosti vakadzosa rubapatidzo rweMweya Mutsvene. Saka zvaive zvasara chete kwaive kuti Eria wenguva yekupedzisira adzose chokwadi cheBhaibheri chaizivikanwa nekereke yekutanga asi chaive chisina kuwanikwa nevamutsiridzi vose. Tiri vana munguva yekupedzisira vanoda kudzoserwa pakutenda kwemadzibaba vapostora vakanyora Testamente Itsva.
William Branham ndiye akava Eria (kana kuti Erija) wenguva yekupedzisira aizoita izvozvo.
Saka ndicho chikonzero nei Johane akati aive asiri Eria aive avimbiswa kuna Maraki, nekuda kwekuti chiprofita ichi chaimiririra hushumiri huviri hwakasiyana hwakapatsanurwa nemakore 2 000. Hakuna muprofita mumwechete aigona kuita zvakavanzika izvi zvose zviri zviviri.
Zvino mumwe muprofita akafanana naMosesi anosanganisirwawo.
MaJuda akabvunza zvakare, “Ndiwe here muprofita uya?”.
DEUTERONOMIO 18:15 Jehovha Mwari wako uchakumutsira muporofita, unobva pakati pako, pahama dzako, wakafanana neni; unofanira kumuteerera iye;
Mosesi aiporofita pamusoro paJesu. Chiprofita ichi chinoti maJuda aifanira kuterera Jesu sezvo aizoshandura Murairo kuti uve nyasha. Mosesi ndiye aive muprofita mukuru weMurairo. Aive mutungamiri wemaJuda zvisina kupokana. Jesu aizova mutungamiri wenyasha pasina kupokana. Aizoripira zvivi zvedu nekudaro ova Musuwo mumwechete wekupinda Denga.
Mosesi paakatungamirira eksodo yekutanga yemaJuda achibuda muEgipita, Jesu aizotungamira eksodo yepiri apo kereke yaibuda muchiJuda.
Kubata kunoshamisa kune simba kwazvo kwehushumiri hwaJohane Mubapatidzi kwakaita kuti maJuda aone kuti yaive yava nguva yeshanduko huru kwavari. Saka nekuda kuziva vakabvunzurudza Johane kuti aive ani uye kuti chii chaiitika.
Johane aive apindira mukati mezvitendero zvavo zvaive nehuwori asi ari masangano “emakereke” ane hutefetefe. Asi vaive vatanga kushushikana nekuti Johane Mubapatidzi aive asina kubva mune rimwechete remasangano ezvitendero aizivikanwa akaita sevaFarise , vaSedusi kana vaHerode kana vaprista kana vatendi vemurenje kana vaZiroti. Mundangariro dzavo, zvaive zvisingagoni kuti Mwari afambe kunze kwemasangano anozivikanwa. Mwari aizoshandisa mumwe wevatungamiri vavo aibva musangano raizivikanwa kuti azivise Messiasi.
(Munyika yanhasi kune masangano 45 000 emakereke akasiyana. Nderipi richatigadzirira pakukwira kudenga pakudzoka kwaJesu. )
Vanhu vaibvunza ava vaingovewo varanda vemasangano. Vaive vasingazvitsvagiri chokwadi vaiteerera vamwe vanhu uye vaifanira kudzoka nemhinduro kuvakuru kuhedhikota. (Hedhikotasi ndiko kunoshandira kota yemusoro wega wega). Saka vakashingirira kuti Johane aifanira kujekesa kuti aive ani. Aive akadzidziswa kupi? Aive apasa muchikoro cheBhaibheri chipi? Aishandidzana nesangono ripi? Vaida ratinoti CV rake rine nhoroondo yakakwana yebasa rake.
Kwavari aifanirwa kubva mune rimwe remasangano avaiziva.
JOHANE 1:23 Akati: Ndini inzwi rounodana murenje, richiti: Ruramisai nzira yaShe; sezvakarebwa nomuporofita Isaya.
Mhinduro yaJohane yaive chishamiso chikuru.
“Ndakaenda kurenje ndiri muduku. Ikoko ndakadzidza kutaura naMwari. Akandiudza kuti ndisave nechekuita nevatungamiri vemasangano enyu kana zvikoro zvenyu zveBhaibheri kana masangano ezvitendero zvenyu. Mwari akandiudza kuti ndizadzise zvakaporofitwa naIsaya. Ndinofanira kuva inzwi rakasimba rakararama murenje makaoma. Hamuna hunyengeri murenje. Zvinhu zvakaoma asi zvakaswatuka. Izwi rangu rinofanira kuva hwamanda inobaya richakanganisa vanhu nekumhura vatungamiri vezvitendero vakaipa avo, nekusenerera kwavo kwekunyengera uye ruvengo rwekutsiurwa, vakatungamirira vanhu munzira dzakarasika nekuda kwerudo rwavo rwekuzviunganidzira pfuma. Achiputsanya vatungamiri vane huwori ndiyo nzira yega yekutwasudza vanhu kuti vagone kutambira nzira yakatwasuka yekuuya kwaMessiasi anova Ishe Mwari. Mwari anoda kuti vanhu vatendeuke kubva kuzvivi zvavo, vorarama hupenyu husina zvipomerwa, votenda kuShoko raMwari rakanyorwa. Ruponeso ruri mumaoko maMessiasi anouya, kwete mumapato ezvitendero kana masangano akasiyana siyana”.
Sekupururudzira Jesu kwakaitwa nevanhu vemuguta paakapinda akatasva mbongoro musi weSvondo yemichindwe, saka vakarasiswa nevakuru vavo vezvitendero vakazopedzisira vachimhura Jesu musi weChishanu chakazotevera muimba yaPirato yekutonga. Vatungamiri vezvitendero ndivo vagara vari vanhu vanyangadzi vechokwadi panguva dzinouya Mwari.
Saka nhasi uno ndiyani wamunofanira kungwarira? Vafundisi. MaBhishopu. Mapostora. Chero vamwe vanhu vanozvigadza pahutungamiri hwekereke.
JOHANE 1:24 Ava vakanga vatumwa vaiva vavaFarise,
Varanda vevaFarise vaive vachishushikana. VaFarise vaitonga (hazvisi muMagwaro) sinagoge yakatanga kunetsa mumashure mekutapwa nevaBabironi. Kwaive kusisina Temberi sezvo yaive yaparadzwa. Saka vaFarise vaibata vari kunze kwekunamata kwemuTembere. Zvino, kuti vachengetedze simba ravopamusoro pevanhu nemari dzavo, vaFarise vakaita sinagoge muIsraeri mumashure mekudzoka kwavo kubva kuhushe hweBabironi. Ipapo vakabva vaita mitemo mitsva sekuisa muFarise pakutonga sinagoge. Izvi zvaive zvisiri muMagwaro zvachose asi yakava nzira yakashanda kwazvo pakutonga vanhu nekumisikidza sangano revaFarise. “Sangano” harisi muMagwaro asi inzira yakanakisa kwazvo yekupereka nekusungirira vanhu kuzvinhu zvakaipa.
Nhasi makereke anotevera muenzaniso iwoyo nekusimudzira vafundisi kuti vave pakutonga kereke. Asi shoko rekuti (“pasita”) “mufundisi’ rakataurwa kamwechete chete muTestamente Itsva, uye kutyisa kwazvo, rakatukwa katanhatu muTestamente Yekare. Saka hakuna simba rakapiwa mufundisi muTestamente Itsva kuti atonge kereke. Mufudzi watinoziva achidaidzwa kuti mufundisi anoonekwa semusoro wekereke. Asi hakuna munhu anokwanisa kuita misoro miviri. Saka kereke muRaodikia, nguva yekereke yekupedzisira, Musoro wechokwadi, Jesu Kristu, akamira kenze kwemusuwo wekereke.
JOHANE 1:25 Vakamubvunza, vakati kwaari: Kana usiKristu, kana Eria, kana muporofita uya, unogobapatidzireiko?
Now they wanted to know why he was introducing a baptism. This was new. Apa vaive voda kuziva kuti nei akazivisa rubapatidzo. Izvi zvaive zvitsva.
JOHANE 1:26 Johane akapindura akati,: Ini ndinobapatidza nemvura; asi pakati penyu pamire mumwe wamusingazivi;
Johane akavadaira kuti rubapatidzo rwake rwemvura rwaizozivisa Messiasi aive asati azivikanwa nemaJuda. MaJuda vakabapatidzwa naJohane semucherechedzo wekutendeuka kwavo kubva kuzvivi. Asi Messiasi aziova Munhu asina zvivi.
Saka rubapatidzo rwake rwaizova mucherechedzo wekusukwa kweGwaiana rechibairo raizobaiwa kuti ropa raro riripire zvivi zvenyika. Mweya wemunhu akafa unonzi mudzimu. Nekuda kwekufa pamuchinjikwa Mweya waJesu waizoburukira kunorwadziswa kuhadhesi seMudzimu unoyera kuti unokunda Satani nekunotora kubva kwaari makiyi erufu uye ehadhesi.
II MAKORONIKE 4:6 Akaitawo midziyo yokusukira ine gumi, akaisa mishanu kurudyi nemishanu kuruboshwe, yokusukiramo; zvinhu zvezvipiriso, zvaipiswa, zvaisukirwamo; asi dziva rakanga riri ravapirisiti rokushambidziramo.
Jesu aifamba pakati pevanhu asi vaida muprofita kuti anongedze kwaari vamuzive.
Pakuuya kwake kwechipiri tichada muprofita kuti azivise zvakavanzika zvake zvakambotendwa mazviri nekereke yekutanga zvikazorasika muNguva yeRima. Kana zvakavanzika zvakarasika izvi zvikaziviswa tinozokwanisa kuona Jesu achifamba achitenderera mumapeji eBhaibheri. Tinozokwanisa kunzwisisa kuti nei akanyora kaviri nemunwe wake muvhu pavaida kutema mukadzi mutadzi nemabwe.
Mumashure mekumuka kwake kunaMateo, Maria akabata tsoka dzake. MuEvangeri raJohane Jesu akamuudza kuti asamubate. Tinoda kugona kunzwisisa kuti kutaura kwakasiyana uku kunorevei.
Vatumwa vaviri vaive mubwiro raive risina munhu asi mutumwa mumwechete ndiye akataurwa naMateo naMarko. Vane zvavari kuedza kutiudza. Tinoda kuziva kuti nei paine musiyano wese wakadai kana tichiti chakavanzika chaMwari (Shoko) rakaziviswa. Vanyori veEvangeri ava havasi vanyori vana vari kutaura zvavanofunga. Kune Mudzimu Unoyera mumwechete uri kufemera varume vana ava. Saka musiyano wega wega une zvauri kuedza kutiudza.
Pachinzvimbo, tinongofuratira semazuva ose tichipa mhinduro dzemakereke, “Hazvina kukosha. Hazvina zvazvinotadzisa paruponeso rwangu.” Zvatiri kutaura neizvi ndezvekuti hatizivi uye hatina hanya nekuzviziva. Hunhu hwakakanganisika. Asi, makaponeswa kana makatendeuka nekupa moyo yenyu kuna Jesu Kristu. Mumashure maizvozvo, hapana chinhu chinokanganisa ruponeso rwenyu. Kunze kwekunge matora chiratidzo chechikara.
Asi kushaiwa hanya kwenyu nezvakaitwa naJesu, zvinoratidza kuti hamuna hukama hwakadzama naye. Sevasikana vashanu vakapusa. Vasikana vakachena, mhandara. Makereke akaponeswa, asi asina hanya. Asina mafuta kuti atungidze mwenje yawo inozovagonesa kuona kana kunzvera Shoko raMwari. Saka vakafara mukusaziva kwavo, vachifunga kuti vanoziva Jesu ivo vaisaziva Bhaibheri. Asi Jesu ndiye Shoko raMwari. Saka kana tisingazivi Bhaibheri hatifaniri kuzviti tinoziva Jesu. Asi munyika yanhasi kusaziva Bhaibheri kunongoonekwa sechinhu chakanaka.
JOHANE 1:27 Ndiye unovuya shure kwangu, asi uri mberi kwangu wandisina kufanira kuti ndisunungure rukanda rweshangu yake.
Johane muprofita mukuru uye mukuri wenzira yaJesu, akasimbisa zvakare kuva muduku kwake kana achienzaniswa naJesu. Izvi zvinotipa muenzaniso wekuti chero muprofita anofanira kuita sei. Kune vanhu vakaita zvikuru kana zvichienzaniswa nesu asi vasingakwikwidzi kana tikavaenzanisa naJesu.
Zvino kunobva kwauya muonero weGondo wakaoma. Rukanda rweshangu?
Mufananidzo waDanieri wemuHedeni wairatidza Babironi semusoro wendarama nehushe hwePersia sechipfuva namavoko. Hushe hwevaGiriki hwaive dumbu nezvidya. Kuchibva kwauya makumbo edare aive hushe hweRoma. Asi zvinhu zvese zvakabva zvashanduka kutsoka.
Munguva dzehushe hwevaHedheni uhwu, ruponeso rwaive kuvaJuda kwete vahedeni. Ruponeso runomiririrwa nemutsetse weruvara rweshizha uri kuseri kwemufananidzo wemuhedheni wakaenda mudenga. Zvino pamuchinjikwa kwaizouya “kuyambukira” apo mutsetse weruvara rweshizha weruponeso wakashanduka kuva wakarara wakaenda nekutsoka. Saka tsoka dzinomiririra makore 2 000 enguva dzemakereke. Roma yechipegani yaive dare rakakwana. Vanonamata Roman chatholic ndivo zvidimbu zvedare zviri mutsoka. Mwenga waKristu ndiro ivhu riri mutsoka. Kubva mumufananidzo wese, hupenyu hwechinhu chinomera hunokwanisa chete kurarama muvhu.
Kereke yeCatholic neMwenga waKristu vachapikisana zvisina muganhu uye havasangani kana kuwirirana. Kereke yekutanga ine chokwadi asi kereke yeRoma inotanga kudzikisira Magwaro nekuzivisa mazwi asimo muMagwaro akaita serekuti Tiriniti kuti riiswe muBhaibheri pakanzuru yeNecene mugore ra 325 AD. Zita raMwari raizorasika apo Mwari aizoonekwa seVanhu vatatu. Baba vari Jehova, Mwanakomana ari Jesu asi Mweya mutsvene haana zita muMagwaro. MaZita maviri kuVanhu vatatu. Hazvina kunaka. Patinobvunza Zita rimwechete raMwari, havazogoni kuwana Zita rimwechete rekudaidza Vanhu vatatu. Saka Zita raMwari rinobva ratsiviwa nemaZita matatu ezvinzvimbo.
Zita raMwari, zvichibva kumaKristu, rinonzi zita raBaba, Mwanakomana naMweya Mutsvene. Asi zita racho nderekutii? MaKristu haazivi. Saka vakarasa Zita raMwari. Vanhu vasina hanya.
Ngatiitei munhu nemufananidzo wedu. Vanhu vaviri panyika mumufananidzo weVanhu vatatu kudenga?
Eva mukadzi. Angava sei mufananidzo waMwari wechirume.
Tiriniti haisi pfungwa yakajeka.
Tiriniti yekuEgipita ine dambudziko rimwechete. Havana kukwanisa kuwana zita rimwechete rekupa mwari wawo wemitumbi mitatu. Saka vakapa umwe neumwe wevanhu vatatu ava Zita. (Horus anonyanya kudaidzwa kuti Osiris naIsis mukadzi wake. Seb ndiye mwanakomana.)
Isis izita rakaipa nhasi totenda chikwata chematerorisiti cheISIS. Saka tinofanira kungwarirawo materorisiti emweya vanotibvisa kubva pane zvakanyorwa muMagwaro.
Kereke yakabva yawedzera kubva paMagwaro nekuda kwezvinhu zvakaita semaarchibhishopu, makadhinari, nemapope. Pakupedzisira, chokwadi chakawanda cheBhaibheri chaizivikanwa nekereke yekutanga chakafa muNguva yeRima. Muna 1520 Martin Luther kuGermany akadzosa kuponeswa nekutenda. Makore akapoteredza 1750 John Wesley akadzosa hutsvene uye kuparidzira zvakazounza nguva huru yemamishinari yakatanga makore akapoteredza 1790 AD. Muna 1906 vePentecosti vakadzosa rubapatidzo rweMweya Mutsvene.
Mumashure maizvozvo taida muprofita wenguva yekupedzisira kuti adzose zvakavanzika zvese zvakanyorwa zvaimbozivikanwa panguva yekereke yekutanga. Asi zvakavanzika zvakanyorwa zvenguva dzemakereke zvakasimbiswa neZvisimbiso zvinomwe kuna Zvakazarurwa Chitsauko 6. Izvi zvaifanira kuziviswa zvinoenderana nekusunungura rukanda rweshangu. Kana rukanda rweshangu rwasunungurwa, tsoka dzemufananidzo wemuHedeni dzinenge dzaziviswa.
Tinobva tanzwisisa pamusoro pemakore 2000 enhorondo yekereke.
Tinobva tanzwisisa zvakatendwa nekereke yekutanga.
Tinobva takwanisa kudzoserwa pakutenda kwekereke yekutanga.
Johane Mubapatidzi akauraiwa kereke yekutanga isati yatanga pazuva rePentecositi, saka aive asati aziva zvaitendwa nekereke yekutanga. Saka aisakwanisa kuzivisa zvakavanzika izvi zvekereke yekutanga. Saka Johane Mubapatidzi akataura kuti aikwanisa kuzivisa Messiasi asi aive asina kufanira kusunungura rukanda rweshangu yake zvaimiririra kuziviswa kwezvakavanzika zveZvisimboso zvinomwe. Zvisimbiso zvinomwe zvaizonyorwa chete makore akazotevera nemupostora Johane. Semuprofita, Johane Mubapatidzi aikwanisa kuratidzwa kuti rimwe remazuva aizouya zvakavanzika izvi zvaizoziviswa nehama Branham, Erija wenguva yekupedzisira, munguva yekereke yekupedzisira. Asi Johane Mubapatidzi aiziva kuti aive asiri iye muprofita aive akatarirwa hushumiri uhu.
Johane Mubapatidzi aioneswa pamweya zvinoshamisa kusvika pakuziva miganhu yehushumiri hwake. Aive murume akanaka. Muprofita mumwe nemumwe ane miganhu yakajeka pahushumiri hwake. (Vafundisi vemasangano dzidzai).
JOHANE 1:28 Izvozvi zvakaitwa paBetania, mhiri kwaJoridhani, kwaibhabhatidza Johane.
Betania zvinoreva kuti “Imba yezambuko” kana kuti “nzvimbo yekuyambukira”.
Nei guta rekumaruwa iri ratingatambura kuti titsvage kuti riri kupi chaipo, rakataurwa nezvaro?
Mwari, Mweya unoona Segondo, ane Muono mukuru mundangariro dzake uye muono wakadzama muzvinhu zviduku duku zvinosiiwa nemaKristu mazhinji sezvisina basa. “Hazvina basa kana kukosha”, ndiyo imwe nzira yekufuratira kutaura kuti “handizivi uye handina shungu dzekuziva”. Iyi haisi nzira ingashandiswa nemunhu anoda kuzova mwenga kutadaira kutaura kunoitwa neachave murume wake. Nemamwe mazwi, udzai Jesu kuti hamuna basa nezvimwe zvinhu zvaakanyora muBhaibheri ipapo munobva mava nechokwadi chekuti mazita enyu anobva abviswa pavanhu vaanoda paMwenga wake.
Tasangana “nekuyambuka” kweruponeso kubva kumaJuda kuenda kutsoka dzemufananidzo wemuHedeni dzinomiririra makore 2 000 enhorondo yekereke.
Betani inzvimbo yekuyambukira” yerwizi Jorodani. Saka Johane Mubapatidzi akabapatidza ipapo nekuti aiziva kuti Murairo weTestamente Yekare “waizoyambukira” kupinda munyasha dzeTestamente Itsva panouya Messiasi.
Mazambuko matatu ekuyambuka rwizi Jorodani akaonekwa munzvimbo iyi. Zambuko rega rega raimiririra “kuyambukira” munzvimbo dzemweya dzakadzama munguva inouya.
Joshua nemaJuda vakayambukira vachipinda munyika yechipikirwa.
Eria naErisha vakayambuka vachibva kumadokero vachienda kumabvazuva pavakabuda muIsraeri.
Erisha akayambuka achidzoka muIsraeri achibva kumahombekombe kwekumabvazuva achipinda kumahombekombe ekumadokero.
Kuyambuka uku kunorevei? Ngatitarisei Muono Mukuru uri pakuri.
Murairo waMosesi waizokundikana kuita maJuda kuti vave vanhu vari nani. Saka kuratidza izvi, Mwari haana kumusiya achipinda munyika yechipikirwa. Joshua akabva amiririra rubapatidzo rweMweya Mutsvene. Jorodani rinomiririra rufu, kufa pakutadza kwamunhu. Joshua akaita zvakadarika kuyambukira kunyika yechipikirwa. Akamiririra “kuyambukira” kwechokwadi kwakaitika pakafa maKristu kuzvivi zvavo vachitendera Mweya Mutsvene kuti uzadze hupenyu hwavo uchivatungamirira muShoko reMagwaro aMwari. Uku “kuyambuka” kubva pakuda kwemunhu (muono wedu muduku) kupinda muKuda kwaMwari (Muono Mukuru).
Nguva yekereke yekutanga, pavaitungamirirwa nemapostora, vakakunda kuita izvi. Zvino tsika dzavanikoraiti, hutungamiri hwevanhu hwakavengwa naMwari, hwakabvisa kereke paMagwaro kusvikira chokwadi chizhinji chaive nekereke yekutanga, charasika muNguva yeRima.
Chikamu chekupedzisira cheMuono Mukuru waMwari isungano yekuti zvikwata zviviri zvevanhu zvichadzoserwa pachokwadi cheBhaibheri chekutanga. Tabernakeri yaive nechigadziko chemwenje chine madavi manomwe (zvichimiririra nguva nomwe dzemakereke0 netafura ine marofu gumi nemaviri echingwa chekuratidzira chaizodyiwa muNzvimbo Tsvene (chichimiririra marudzi gumi nemaviri evaIsraeri vanofanira kuva vari munyika yechipikirwa.
Saka Erija akayambuka rwizi Jorodhani kuti atorwe kuti akwire kuDenga mungoro yemoto. Mucherechedzo unodakadza wevana vekereke venguva yekupedzisira vakadzoserwa naErija kuBhaibheri rakanyorwa kudzidziso yemadzibaba mapostora eTestamente itsva. Vana ava (mwenga wenguva yekupedzisira akadzoserwa kuBhaibheri nehama Branham) ndivo vanobva vakwira kudenga kunosangana naShe mumakore. Mwenga anobva “ayambuka” kubva pakuvora kupinda mukusavora kubva panyika kupinda muDenga.
Asi mumwe muprofita, Eria kumaJuda, anofanira kudzidza zvakavanzika zvakanyorwa kubva kudzidziso yehama Branham. Mumashure mekukwira kudenga kwekereke, anobva “ayambukirazve” mhiri kwaJorodani kuti anodzosera dzidziso yekereke yekutanga kumaJuda 144 000 munguva yekutambudzika kukuru.
“Kuyambukira” uku kwese kunobva paMunhu mumwechete, Jesu Kristu. Iye ega ndiye anokwanisa kuzadzisa zvinhu zvese.
Saka mupostora Johane anobva aunza Jesu pachena kuti tione kukosha kwake.
JOHANE 1:29 Ava mangwana wakavona Jesu achivuya kwaari, akati: Tarirai, Gwaiana raMwari, rinobvisa zvivi zvenyika.
Tarirai, Shoko (Jesu) rakauya kumuprofita aive akamira mumvura. Mvura mucherechedzo weShoko raMwari. Muprofita wechokwadi anogara achiwanikwa ari paMagwaro.
Jesu akatanga hushumiri hwake hunopera atora zvivi zvenyika paCalvari uye semutakuri wezvivi, anotakura zvivi zvedu oenda nazvo kugehena kwaanonozvisiya pamusoro paSatani baba vezvivi, muvambi wezvivi.
Zvino Ropa raShe rakadeurwa kuti riripire mugove wezvivi richatisuka nekuti zvakaprofitwa kanosvika ka 33 pamusoro perufu rwake pamuchinjikwa zvakazadziswa musi waakarovererwa. Saka rufu rwake rwakazadzisa zvakazara zvakaprofitwa zvese pamusoro paMessiasi. Akafa nenzira yakataurwa neMagwaro anotaura pamusoro pekufa kwake. Kuzadzisa mavhesi ese eBhaibheri anotaura pamusoro peCalvari zvinoreva kuti mavhesi ese akazadziswa akafanana nemvura inosuka zvivi zvedu kana tikaisa kutenda kwedu murufu rwake rwaakafira isu.
JOHANE 1:30 Uyu ndiye wandaireva, ndichiti: Shure kwangu kunovuya murume, wakavapo mberi kwangu, nokuti wakanditangira.
Johane Mubapatidzi akatsigira zvakare kuti Jesu ndiye Messiasi. Johane akamunongedzera kuti vanhu vose vazive kuti Messiasi ndiyani. Johane akatanga kuuya kuti agonongedzera Jesu. Asizve akabvuma kuti Jesu ndiye mukuru. Ndiye Mumwechete akaprofitwa neBhaibheri kuti achaparadza kubata kwezvivi pamusoro pevanhu.
Johane aikwanisa kunongedzera Jesu asi Jesu ndiye ega anokwanisa kukunda zvivi nerufu.
Jesu aive Mwari mumuviri. Saka aive agara ari Muviri weMweya waigara Mwari kubva pakutanga.
JOHANE 1:31 Neni ndakanga ndisingamuzivi, asi ndizvo zvandakavuyira, ndichibapatidza nemvura, kuti avoneswe kuvaIsraeri.
Johane aive asati abvira asangana naJesu. Asi Johane aiziva kuti nekuti aive muprofita Shoko raizouya kumuprofita.
Apo Erisabeta, mai vaJohane, vakanga vane mwedzi mitanhatu vakazvitakura, Maria, aive achangobva kubata mimba yaJesu, akauya kuna Erisabeta akagara kwemwedzi mitatu. Saka Jesu Shoko rakauya kuna Johane apo muprofita aive mumvura dzemumimba. Johane asati azvarwa, agara mwedzi mitatu, Maria akabva aenda. Pakuzvarwa, mvura inoputsika saka shoko rakagara nemuprofita paaive mumvura chete.
Makore anosvika makumi matatu akazotevera, Johane paaibapatidza murwizi rweJorodani, kuita uku kwakadzokororeka. Zvakare aive Jesu (Shoko) akauya kumuprofita Johane paaive mumvura dzeJorodani. Shoko raMwari rinouya kumuprofita.
JOHANE 1:32 Johane akapupura, akati: Ndakavona Mweya achiburuka kudenga senjiva, akagara pamsoro pake.
Mupostora Johane akazivisa Jesu seGondo guru guru, Ari Mwari. Saka Evangeri raJohane harina kuzivisa rubapatidzo rwaJesu rwakaonekwa rwemvura asi rakaenda mberi pakuuya kweMweya Mutsvene uchiuya seNjiva pamusoro paJesu. Kwaive kuzodzwa kweMunhu kuti atange hushumiri hwake.
MABASA 10:38 RaJesu weNazare ta, kuti Mwari wakamuzodza noMweya Mutsvene nesimba; iye waipotenyika, achiita zvakanaka, achiporesa vose vakamanikidzwa naDhiabhorosi; nokuti Mwari waiva naye
Mweya mutsvene hauna kupinda maari.
Wakagara pamusoro pake. Uku kwaive kuzodzwa kwete rubapatidzo rweMweya Mutsvene.
Johane Mubapatidzi akagamuchira Mweya Mutsvene achiri mudumbu ramai vake.
RUKA 1:15 Nokuti iye uchava mukuru pamberi paShe; haangatongomwi waini nezvinobata; uchazadzwa noMweya Mutsvene kubva padumbu ramai vake.
Johane akaramba achisimbisa kuti Jesu aive pamusoro pake. Saka kana Jesu, paakauya mumvura kuti abapatidzwe, aive asina Mweya Mutsvene maari saka Johane aive ari pamusoro pake pachikamu ichocho.
Muviri waJesu wakazozvarwa Johane azvarwa kare. Johane aive ari mukuru pakuberekwa nemwedzi mitanhatu. Asi Jesu akagamuchira kuzara kweMweya Mutsvene pakubata kwemimba. Mweya Mutsvene waive wagara uriko kubva kutanga kusati kwavapo. Isu vanhu tinonetseka kunzwisisa chinhu ichi chekurarama nekusingaperi.
Kana kuzara kwehuMwari kwakauya maari pamahombekombe aJorodani, Jesu angadai akashanduka asi Jesu haashanduki.
Saka kana Jesu akamboita kuzara kwehuMwari maari pane imwe nguva , saka akagara aine kuzara kwehuMwari maari.
JOHANE 1:33 Neni ndakanga ndisingamuzivi; asi wakandituma kubhabhatidza nemvura, ndiye wakati kwandiri: Uyo waunovona Mweya achiburuka pamusoro pake, akagara pamusoro pake, ndiye unobhabhatidza noMweya Mutsvene
Mweya Mutsvene wakaburuka paari ukagara pamusoro pake. Hauna kupinda maari. Saka kwaive kuzodzwa pamberi peruzhinji kwaizogara kuri pamusoro pake, kuchimuita “Mumwechete Akazodzwa”, Kristu. (Kristos’ muchiGiriki zvinoreva kuti “Mumwechete akazodzwa”).
Johane Mubapatidzi akaenda nekutenda. Akavimba kuti kana akazadzisa zvakaprofitwa naIsaya pamusoro pezwi murenje, Jesu aizouya kwaari, nekuti aisaziva kuti Jesu aive ani.
Mupostora Johane zvakare akasimbisa kuti Mweya Mutsvene hauna kupinda muna Jesu asi wakagara pamusoro pake. Izvi zvakakosha nekuti vanhu vazhinji vaitenda kuti Mweya Mutsvene wakapinda munaJesu paJorodani saka akashanduka kubva pakuva munhu kuva Mwari-Munhu. Uku kukanganisa kukuru, nekuti Jesu haana kubvira ashanduka.
Jesu aingogamuchira kuzodzwa paruzhinji. Nei?
Davidi akazodzwa kuva mambo wemaJuda nemuprofita Samueri. Asi haana kutora humambo kusvikira muvengi wake Sauro afa.
Jesu akazodzwa neMweya Mutsvene kuita Mambo wemaJuda pamahombekombe aJorodani. Uku kwaive “kuyambukira” kubva kunyika ine zvivi kupinda munyika isina zvivi nekuti Muviri wake ndiwo wakava guruva rekutanga kurarama rakarurama.
Njiva, mucherechedzo werunyararo, inomhara paGwaiana chete, mucherechedzo wekushaiwa zvipomerwa.
Asi Jesu Mwanakomana waDavidi, haakwanisi kutora hushe hwake kusvikira muvengi wake “mweya weChikara waantikristu wezvechitendero zvematongerwo enyika uye mari wauraiwa paAmagedhoni. Zvino Jesu anobva atanga kutonga kwemakore 1000 netsvimbo yedare. Nekuti anoda hushe husina zvivi. Asiwo kune vaHedheni vasina kubvira vanzwa Evangeri vachapona paAmagedhoni. Vachararama muMereniyamu asi vanenge vachifanira kuita hunhu hwakanaka.
Mereniyamu ndiyo ichava Denga rekutanga, kuraira zvichave zvakaita Denga panyika naJesu ari Mambo wedu.
Satani akasungirirwa nezvinenge zvichiitika nekuti anenge asingakwanisi kuita chero chinhu sezvo Jesu anenge ari panyika.
Asi vatsvene vakamutswa kuvakafa kubva mumakore 2 000 enhorondo yekereke vanenge vari naJesu. Vanengewo vari mumiviri yakanaka isina zvivi uye vari mukubwinya.
Mumashure meMereniyamu kuchava nekumukira kwekupedzisira. Gungwa rinobva raputika roparadza chiso chenyika. Kunobva kwauya nyika itsva, inenge isina zvivi.
Jesu ndiye anenge ari Mambo wayo yese.
Jesu anenge achifanirawo kuzodzwa semuPrista Mukuru wemaJuda.
EKISODO 29:4 "Zvino uuye naAroni navanakomana vake kumukova wetende rokusangana, ugovashambidza nemvura;
EKISODO 29:5 Utorewo hanzu, ugofukidza Aroni nguvo nejasi reefodhi, neefodhi, ......
7 Zvino unofanira kutora mafuta echizoro, uadire pamusoro wake, umuzodze.
Muprista mukuru wekutanga aive Aroni. Aifanira kushambidzwa nemuprofita Mosesi ozodzwa nemafuta. Mafuta mucherechedzo weMweya Mutsvene.
Jesu ndiye muPrista Mukuru wesungano itsva, Hurongwa hwaMwari hwakarurama. Aifanira kushambidzwa nemuprofita Johane Mubapatidzi achibva azodzwa neMweya Mutsvene.
Saka maKristu, pavanogamuchira Jesu semuPrista wavo mukuru, Mambo, uye Chibairo vanenge vachitoteerera Murairo weTestamente Yekare. Jesu anokudza Murairo kusvika pachidanho chepamusoro-soro pakatadza kusvikwa nemaJuda.
JOHANE 1:34 Ini ndikavona, ndikapupura kuti uyu ndiye Mwanakomana waMwari.
Johane Mubapatidzi akabva apa chisimbiso chekupedzisira pakuziviswa kwaJesu. Uku ndiko kwaive kukura kwehushumiri hwake. Aive apedzisa kuzivisa Messiasi. Aive aita zvaidiwa kuti aite naMwari. Johane Mubapatidzi aive anongedzera Messiasi chaiye.
Adamu ndiye aive mwanakomana waMwari wekutanga akawira muzvivi. Johane zvino aivepo kuzivisa chokwadi. Kekutanga kubva pana Adamu mwanakomana waMwari akarurama aive auya panyika.
Izvozvi tinosvika pachinangwa chikuru chehushumiri hwaJohane Mubapatidzi.
Johane, totenda hushumiri hwake hune simba kwazvo, aive aita vadzidzi vaimutevera nekuti aive munhu mukuru kwazvo. Aidakadza. Vadzidzi vake vakabatira paari vakamutevera. Vakatenda zvese zvaaitaura.
John now had to show them what the correct path was for them to follow. Johane aive akufanira kuvaratidza kuti nzira chaiyo yekuti vatevere ndeipi.
Johane paaive anongedzera Jesu, vadzidzi vake vaifanira kumira kutevera muprofita Johane Mubapatidzi votanga kutevera Jesu Shoko.
JOHANE 1:36 Akatarisisa Jesu achifamba, akati: Tarirai, Gwaiana raMwari!
Asi Johane, pachinzvimbo chekunongedzera hushumiri hwake huri muMagwaro hwakanakisa, akatanga kunongedzera Jesu achiratidza vadzidzi vake. Zvakataurwa nehama Branham zvinofanira kutinongedzerera kune zvakanyorwa muBhaibheri.
Zvino vadzidzi vaviri, pavakawana zaruriro kubva pane zvakataurwa nemuprofita, vakabva vatevera Jesu, Shoko raMwari, pavakaziva kuti zvakataurwa nemuprofita Johane Mubapatidzi zvinorevei pamusoro peShoko.
JOHANE 1:37 Ivavo vadzidzi vaviri, vakamunzwa achitaura, vakatevera Jesu.
Uku ndiko kwaive kukosha kwehushumiri hwaJohane Mubapatidzi. Kana vadzidzi vake vakanzwisisa zvaaitaura, ipapo vaifanira kutevera Jesu pachinzvimbo chekuramba vachitevera Johane Mubapatidzi.
William Branham akauya kuzozivisa zvakavanzika zvakanyorwa muBhaibheri zvakatendwa mazviri nekereke yekutanga zvikazorasika muNguva yeRima. Hushumiri hwake hune simba kwazvo hwakakwezva vateveri vakawanda kwazvo. Paaizivisa Shoko rakanyorwa, vadzidzi vake vaive vakatarisana nesarudzo mbiri.
Yekutanga, vaikwanisa kuramba vachitevera nekurumbidza hama Branham. Iyi yaive sarudzo yakaipa sezvo vaizovaka kutenda kwavo kusingabvi muMagwaro pamusoro pezvaakataura zvakasimudzirwa kuva “Izwi raMwari” pachinzvimbo chekuti rive “izwi remutumwa wechinomwe”.
Kana kuti, yechipiri, Mwenga wechokwadi anoona kuti anofanira kudzoserwa pakutenda kuShoko rakanyorwa muBhaibheri rakatendwa nekereke yekutanga. Zvakadaro, vakavaka kutenda kwavo nekutevera mavhesi akanyorwa muBhaibheri. Saka vakatevera zaruriro yaJesu Kristu, yavakawana kubva pane zvakataurwa, paanofamba nemapeji eBhaibheri.
Johane Mubapatidzi aive nevadzidzi vakawanda asi vadzidzi vake vaviri chete, panguva iyoyo, vakatevera Jesu.
Izvi zvinoratidza kuti zviri nyore zvakadii kupofomadzwa nehushumiri hune simba hwemuprofita mukuru zvinoita kuti vadzidzi vatevere muprofita waMwari pachinzvimbo chekutevera Mwari anotuma muprofita iyeye.
Vadzidzi vaJohane Mubapatidzi vashoma kwazvo nevadzidzi vaWilliam Branham vashoma kwazvo vakakwanisa kuona izvi.
Pane kuita kunofadza kwazvo kunofananidzwa nekomunizimu. Kubva kwakanyanya kunoita makomunisiti padzidziso yaLenini, ndiko kukurawo kwekukudza kana kumhura kwavanoita Lenin. Uku kuita kwekutsiva kwemaitikiro ezvinhu. Vanomhura dzidziso dzaLenin asi votsiva kuita uku nekurumbidza Lenin.
Hama Branham vaifanira kutidzosera kuShoko rakanyorwa. Kure kunoenda vateveri vake kubva pakutsigira zvavanotenda neShoko rakanyorwa, ndiko kukurawo kwekunamatwa uye kusimudzirwa kwehama Branham nezvaakataura.
JOHANE 1:38 Jesu akatendevuka akavavona vachitevera, akati kwavari: munotswakeiko ivo Vakati kwaari Rabhi (ndokuti Mudzidzisi, kana zvichishandurwa, munogarepiko?
Uyu waive mubvunzo wakadzama.
Vadzidzi vaifunga pamusoro penzvimbo yepasi pano yaigara Jesu.
Asi dzidziso yaJohane yakazivisa Jesu ari Mwari, Gondo Guru rinoona Muono mukuru, makore 2000 enhorondo yekereke achiuya. Akaona kereke yese yemakore 2 000 seMuviri wake. Jesu ndiye Musoro wekereke.
Hakuna Magwaro anoti mufundisi ndiye musoro wekereke.
Saka Jesu aizogarepi kwemakore 2000 kuti aponese kereke, muviri wevatendi?
Jesu aigara muShoko rake rakaziviswa.
Kunyange mumazuva ekutanga aya aive asina nzvimbo yaizivikanwa kuti ndiyo yake yaanogara nekuti aifamba achitenderera munzvimbo dzakasiyana kuti azadzise zvakaporofitwa pamusoro pake. Jesu aive muVangeri uye mupostora, saka aifanira kutenderera. Akaita hushumiri hwese. Nzvimbo yake muMagwaro yaive yekuuya kumaJuda ari Messiasi. Izvi zvaiisira hushumiri hwake muganhu munyika yechipikirwa yaIsraeri.
Akarambwa nemaJuda paCalvari, saka aizogarepi?
Mumoyo yevarume nevakadzi vakazvarwa patsva vakaita kereke yekutanga.
Mapostora akava madzibaba emweya pakereke paakabva kwairi. Zvino vanhu vakabva vabva pachokwadi muNguva yeRima apo kereke yakatanga kutevera hutungamiri hwevanhu. Kukazouya rumutsiridzo muna 1520 apo Martin Luther kuGermany akadzidzisa ruponeso kupfurikidza kutenda. Makore akapoteredza 1750 John Wesley kuEngland akadzosa hutsvene nekuparidzira zvakaunza nguva huru yemamishinari. Muna 1906 rubapatidzo rweMweya Mutsvene rwePentecositi rwakadzoswa. Chaive chasara kwaive kudzoswa kwezvakavanzika zvakanyorwa muBhaibheri kupfurikidza kutsanangura micherechedzo yemuBhaibheri kuitira kuti tinzwisise nekutenda zvakafanana nezvakatendwa mazviri nekereke yekutanga.
Izvi zvinoitika chete kuzvikwata zviviri. William Branham aizozivisa zvakavanzika zveBhaibheri zvinozotigonesa isu maKristu kutenda nekuita sekereke yekutanga. Mosesi naErija vanozouya kuzozivisa zvakavanzika zvimwechete izvi kumaJuda kuIsraeri munguva yeKutambudzika kukuru pavanodaidza maJuda 144000.
Uyu ndiwo muono mukuru wakagara uru mundangariro dzaJesu paaitaura.
Jesu aidawo kuziva chinangwa chemudzidzi.
Tinomutevera nekuda kwezvatinozowana kwaari here? Vaimudaidza kuti Ishe zvichiratidza kuti vaimuona semutungamiri wavo mukurusa.
Vadzidzi vemuprofita Johane Mubapatidzi havana kubvira vaedza kusimudzira Johane kusvika pachinzvimbo chaJesu.
(Vafundisi vemasangano dzidzai).
Vakasiya muprofita mukuru wenguva yavo nekuti vakaziva kuti Jesu ndiye aive Ishe wezvokwadi, Chokwadi Chikuru, kwete Johane Mubapatidzi.
Saka vakada kuziva kuti Jesu aigarepi.
Nhasi uno Jesu anogara pakati pemapeji eBhaibheri. Mavhesi eBhaibheri ndiwo zaruriro yechokwadi yatinayo kuti tizive kuti Jesu ndiyani zvakare tingamuwana sei munguva yedu yatiri kurarama.
Jesu haasi kurarama muzviitiko zvakadarika. Ari kurarama muzaruriro yeMagwaro iri pamusoro pezviitiko zviripo nhasi kune avo vanoda chokwadi uye vane rudo rwekudzidza.
“Mwari wamunotora muBhuku Tsvene iyi”, ndiye anotonga magumo enyu.
Munowana Kristu mumavhesi eBhaibheri chete. Mutsvagei imomo.
Kutevera Jesu kwaive kusiri nyore. Kwaizoshandura mararamiro avo. Aive asingagari pavaigara. Saka kana tikatevera Jesu achatishandura.
JOHANE 1:39 Akati kwavari: Vuyai, muvone. Vakaenda, vakandovona kwaaigara, vakagara naye zuva iro; yakanga iri nguva inenge yegumi.
“Huyai muvone” ndizvo zvinotaurwa panotaura chimwe nechimwe chezvipenyu zvina zvakapoteredza chigaro chehushe panoziviswa Zvisimboso zvina zvekutanga.
ZVAKAZARURWA 6:3 Wakati azarura chisimbiso chechipiri, ndikanzwa chisikwa chipenyu chechipiri chichiti: Vuya uvone
“Huya” zvinoreva kuti tinofanira kubva patinenge tiri. Kutevera Jesu zvinoreva kuti munoramba muchifamba.
Kana gondo rinobhururuka rikamira, rinobva radonha.
Zaruriro haimiri kana ukabata chokwadi. Dzinoramba dzichizaruka kusvika pazvidanho zvakadzama apo mavhesi eBhaibheri anotanga kunzwisisika.
“Uone”. Kutevera Jesu kunoreva kuti tichawana muono wakadzama muShoko rakanyorwa. Tinozokwanisa kuyananisa Magwaro pamwechete kuti titsigire kutenda kwedu. Tinozoona nzira dzinofamba neBhaibheri nenzira yakafanana nekufamba kwemasaisai akadzama murwizi. Bhaibheri ndiro Rwizi rweHupenyu.
Jesu akaenda navo kwaaigara. Nhasi Jesu anogara muBhaibheri. Kana muchida kuziva zvakavanzika zvezvakanyorwa muBhaibheri munofanira kutora zvakataurwa nehama Branham mozvidzosera kuMagwaro. Kana zvaakataura zvikaratidzirwa mumavhesi eBhaibheri, munobva maziva kuti makanzwisisa zvaakataura.
JOHANE 1:40 Mumwe waivavo vaviri, vakanga vanzwa Johane, vakamutevera, vaiva Andreasi, munun’una waSimoni Petro.
Andreasi aive mudzidzi waJohane Mubapatidzi. Akabva pakutaura kwemuprofita Johane kwakamunongedzerera kuShoko, Jesu. Akabva ateerera nekutevera Shoko raive Jesu Kristu. Iyi ndiyo kiyi yezvese. Zvakataurwa nemuprofita zvakazivisa Shoko kwaari kuti atevere Shoko (Jesu). Akabva ateerera Shoko, rinova Jesu.
Muprofita akazivisa Shoko kwaari iye akabva atevera Shoko, kwete muprofita.
JOHANE 1:41 Iye akatanga kuwana Simoni, mukoma wake, akati kwaari: Tawana Mesiasi (ndokuti Kristu, kana zvichishandurwa,)
Andreasi aive mudzidzi waJohane Mubapatidzi asi haana kutungamirira mukoma wake kuenda kuna Johane Mubapatidzi.
Andreasi akamutungamirira kuenda kuna Jesu, Shoko.
Hatina kudanwa kuti titungamirire vanhu kutevera zvakataurwa naWilliam Branham.
Zvaakataura zvinozivisa Shoko raMwari kwatiri isu tinofanira kutungamirira vanhu kuShoko rakaziviswa, Bhaibheri rakanyorwa.
Andreasi, aiziva Johane Mubapatidzi, akaratidza kuti aive anzwisisa kudzidzisa kwemuprofita Johane kupfurikidza kuunza mukoma wake Petro kuna Jesu. Asi Petro aizokunda Andreasi muzvikamu zvekubata kwake paEvangeri. Kusaziva muprofita Johane hakuna kutadzisa Petro kubata basa rinodadisa kuna Jesu.
Petro aive asiri mudzidzi waJohane Mubapatidzi wepedyo sezvaive Andreasi. Petro aive asina kutomboteerera apo Johane Mubapatidzi ainongedzera Jesu. Zvakadaro, Petro akazova mudzidzi waJesu akazivikanwa kwazvo kukunda Andreasi, zvisinei nekuti Andreasi aive mudzidzi waJohane Mubapatidzi akanga akazvipira kwazvo. Kuva mudzidzi wepedyo wemukuri wenzira yaKristu hazvina kuita kuti Andreasi ave anokosha kukunda vamwe vadzidzi vaJesu. Vamwe vakatonzwa zvishoma kwazvo pamusoro paAndreasi. Petro ndiye atori nehushumiri hune mbiri uye akanyorawo maBhuku maviri eTestamente Itsva. Kuzvipira kubata semudzidzi wemuprofita Johane hakuna kuisa musiyano pana Andreasi.
Saka kuziva hama Branham semunhu wepedyo hazviisi musiyano kana takatarisana nekuita kuti vanhu vazive zvakavanzika zveBhaibheri. Kuteerera nekunzwisisa Shoko raMwari hazvirevi kuti unofanira kuziva muprofita pachake.
Andreasi angadaro aive ari iye ega mudzidzi waJohane Mubapatidzi akazova mupostora waJesu Kristu.
Kuva mudzidzi waWilliam Branham hazvirevi kuti ungazova mutungamiri wekereke yechokwadi yaJesu Kristu, Shoko.
Tinobva pamazwi akabatwa paitaura vanhu kuti tisvike pakunzwisisa Shoko. Hatigare nemazwi akabatwa paitaura vanhu. Zvakare, hatiturikiri zvakataurwa kuti zvirwise Magwaro.
Kutarisa kukanganisika kwaita vatendi veMharidzo (mess-age) totenda kudzidziso dzevafundisi vakasiyana-siyana dzinobva pamashoko akataurwa, zvinoita sekuti vashoma vanokoshesa hama Branham vachabudirira pakuzivisa zvakavanzika zveShoko rakanyorwa. Kune kuita kechimanje-manje pamusoro pemazwi akabatwa paitaura vanhu kwekuti vazhinji, kana vasitori vese vanotevera masangano emharidzo havazivi Bhaibheri.
Jeremia akaporofita pamusoro pekuipa kweizvi.
JEREMIA 23:1 Vane nhamo vafudzi vanoparadza nokuparadzira makwai amafuro angu! Ndizvo zvinotaura Jehovha.
2 Naizvozvo zvanzi naJehovha, Mwari waIsiraeri, pamusoro pavafudzi vanofudza vanhu vangu, "Makaparadzira makwai angu, mukaadzinga, mukasaatarira; tarirai, ndichakurovai nokuda kwezvakaipa zvamabasa enyu ndizvo zvinotaura Jehovha.
Vafundisi vemasangano vanofara kwazvo kubvisa vese vanopikisa maonero avo.
Motto yemufundisi wemazuva ano ndeyekuti, “Munhu wese anofanira kutenda kumaonero angu”.
Kana tikawana zaruriro (mufananidzo) kubva pamazwi akabatwa paitaurwa nehama Branham tinofanira kutevera mufananidzo iwoyo kana dzidziso kupfurikidza mapeji eBhaibheri akanyorwa. Tinogona chete kutevera Jesu kupfurikidza mavhesi eBhaibheri. Ndimo maanogara nhasi uno. Muzvakavanzika zveBhaibheri zvakaziviswa.
Kana tisinganzwisise zvakanyorwa muBhaibheri hatikwanisi kutaura kuti tiri kutevera Jesu.
ISAYA 28:10 Nokuti zvinongoti chirevo pamusoro pechirevo, chirevo pamusoro pechirevo, murayiro pamusoro pomurayiro, murayiro pamusoro pomurayiro, apa zvishoma, napapo zvishoma."
JOHANE 1:42 Akamuisa kunaJesu. Jesu akamutarira, akati: Ndiwe Simoni, mwanakomana waJona, uchanzi Kefasi (ndiko kuti dombo kana zvichishandurwa.)
Dombo chinhu chiduku chakazvimiririra. Rinotaura pamusoro pezaruriro inosangana nemunhu mumwe- nemumwe pamusoro peMagwaro. Chimwe chinhu chaunozvionera. Usingadzokorore zvinofungwa neumwe munhu. Unenge usingatsigiri ungano. Kana ukatevera ungano, unodya guruva. Senyoka kuna Genesisi.
Kwete kuti “Kereke yangu...” Zvino “kereke yangu” haina chekuita nezvazvo.
Munhu akazvimiririra, munhu mumwechete! Gehena rese rinopikisana neDzidziso iyi. Gehena rese rinopikisana nechokwadi ichi, asi chiri Chokwadi.
Jesu haana kubvira ataura kuti “Zvino Petro iwe naJohane, nevamwe vanhu vose, mune zaruriro, saka kereke yese yaponeswa.” kwete.
"Zvaive pamusoro pake, iye ega. “Ndinoti kwauri, iwe”, kwete kwavari “kwauri Petro; pamusoro peruware urwu ndichavaka kereke yangu.” Izwi rekuti Petro, rinoreva kuti “dombo”. Dombo rinoreva “mumwechete akapupurwa” kana kuti “akatsaurwa”.
Pamusoro pedombo rakatsaurwa, pamusoro pechimwe chinhu chakatsaurwa; mazviona, vakadanwa, kereke yakadanwa; pamusoro peibwe iri, pamusoro “pezaruriro iyi”. Nyama neropa hazvina kuizivisa kwauro. Asi pamusoro pezaruriro iyi, ungano yakadanwa, ndichavaka kereke yangu mavari. Uye masuwo ehadhesi haangaikundi.”
Hakuna chero bvudzi rimwe remusoro wako richaparara. Uri Wangu! Ndichakumutsa pazuva rekupedzisira, opihwa Hupenyu husingagumi, nekumumutsa pazuva rekupedzisira.” Ndiyoyi, zaruriro. Kwete ivo asi “iye”, munhu mumwechete!
Kwete ungano; munhu mumwechete! Gehena rese rinopokana nazvo.
Jesu aida vadzidzi vaigona kuzvifungira vachitevera kutenda kwavo neMagwaro, sezvo vaitora Magwaro semukuru wavo. Dombo rimwe nerimwe rakazvimiririra. Mutendi mumwe nemumwe anofanira kuzvifungira achidzidza Bhaibheri kwete kungotevera mitemo yekereke kana tsika dzevanhu kana hutungamiri hwevanhu.
Makereke anosarudza kutenderana nezvinofungwa nevanhu vanovatungamirira.
.... Makereke vanozvizadza nemweya wemufundisi kwete Mweya waMwari. Ndizvo chaizvo. Hatidi mweya yevamwe vedu; hapana chikonzero chekuti tiite saizvozvo. Tinoda Mweya waMwari. Mukapinda mukereke mukatarisa maitiro emufundisi. Tarisai sangano iroro rese rinongoita maitiro akafanana nemufundisi wavo.
Izvi ndizvo zvinoparadza kereke. Kuzadzisa zvido zvevanhu.
Petro aive akazvipira kuzvifungira. Aive asina kusungirirwa pakuita kweungano. Aikwanisa kugamuchira zaruriro kana kunzwisisa kwake kubva kuna Mwari. Aive asingavimbi nemafungiro evamwe vanhu.
Petro aive chikamu cheungano asi aive akatsaurwa kubva kwavari nekuti aisatya kuzvifungira.
Tsika dzevaNikoraiti ndiko kusimudzirwa kwemunhu mutsvene neungano. Hupikisi hahutenderwi mumasangano aya. Hamutenderwi mibvunzo isina kutarisirwa pamusoro peBhaibheri. Vanhu havatenderwi kuzvifungira asi vakaiswa kuchikwata chevanhu vatsvene vakasarudzwa vakaitwa kuti vafunge nenzira imwechete. Vanogona chete kudzokorora mitemo yeungano sezvo vese vanopikisa vasingasanganisirwi pachikwata ichi. Hakuna zaruriro inouya kumunhu akazvimiririra apo munhu anoona dzidziso pachake achishandisa mavhesi eBhaibheri rakanyorwa. Chinhu chega chinotambirika kuzviwisira semapofu kuhudzvanyiriri hwevakuru vemakereke.
Jesu aiziva kuti kutonga kwevafundisi mumakereke uku kuchadzingira Shoko rakanyorwa kunze kwekereke munguva yekereke yeRaodikia. Saka akarumbidza Petro pamusoro pehunhu hwake hwakasimba. Petro aive asiri mufundisi anonyengera ane kunyemwerera kunonyangarika kana atarisana nevhesi reMagwaro rinopikisana nemaonero ake.
JOHANE 1:43 Ava mangwana akada kuenda Garirea, akawana Firipo; Jesu akati kwaari: Nditevere.
Jesu paaisarudza mudzidzi aida kuti munhu iyeye amutevere (Shoko). Kwete umwe munhu.
JOHANE 1:44 Firipo wakanga ari weBetsaida, guta raAndreasi naPetro.
Betisaida zvinoreva kuti “imba yekuredza”. Nzira yakatanga kuonekwa. Jesu aida kuti vadzidzi vave “varedzi vevanhu” saka akaenda kuguta raive nezita raireva kuti “imba yekuredza”. Guta reBetisaida raive kumahombekombe ekumusoro kwegungwa reGarerea rine mvura yakanaka yakazara nehove.
Uyu mucherechedzo weTestamente Itsva apo pasi rese raizoredzwa neEvangeri, totenda nguva inoshamisa yemamishinari. Mvura dzegungwa guru mucherechedzo wevanhu nemarudzi mazhinji asina kugadzikika sezvo vachisimbirira zvizhinji pamakaro nekuzvida kukuru kuti vagutse ndangariro dzavo dzakawora.
ZVAKAZARURWA 17:15 Zvino akati kwandiri: mvura yawavona inogarwa nemhobwe, ndivo vanhu, navazhinji namarudzi, nendimi.
Muredzi anodhonza hove kubva mumvura kusvikira hove “yayambukira” kupinda munyika pamusoro pemvura painonofa. Uyu mucherechedzo wevatadzi vanogamuchira Ishe Jesu seMuponesi vodhonzwa kuenda muchidanho chemweya chepamusoro pavanonofa muzvivi votendera Mwari kuti atonge hupenyu hwavo.
Johane Mubapatidzi aishandira kumusoro kweGungwa rakafa (Dead Sea) rine munyu wakawandisa zvekuti hamurarame hove. Izvi mucherechedzo wemurairo wemaJuda usingagoni kuponesa maJuda apo vanoteerera vatungamiri vezvitendero zvavo vakavafurira kuti vatengese nekuuraya Messiasi wavo. Vafundisi vezvitendero nhasi vanofurira vanhu kuti varambe Magwaro akanyorwa vachitevera mazwi akabatwa paitaura vanhu. Vanhu vanobva vapindawo mugwara revasikana vakapusa avo vakagarirwa nenguva yeKutambudzika kukuru pachinzvimbo chekuenda kuChirairo cheMuchato .
Nhasi uno vafundisi vemasangano eMharidzo (end time massangers) vanonyengera vanhu vanovatevera kuti vasimbe nemazwi akabatwa paitaura vanhu vachiramba Shoko raMwari rakanyorwa. Vanosvibisa mazita nehunhu hwevanhu vanotevera Magwaro nemazvo. Ndicho chikonzero nei Jesu akamira kunze kwekereke yekupedzisira yeRaodikia.
20 Tarira, ndimire pamukova, ndichigogodza; kana munhu akanzwa inzwi rangu, akazarura mukova ndichapinda kwaari, ndicharayira naye, naiye ucharayira neni.
Hakuna kereke ichakunda. Vanhu vakazvimiririra chete. Hutefetefe huri mumakereke hahufadzi Mwari.
JOHANE 1:45 Firipo akawana Natanaeri, akati kwaari: Tamuwana iye, wakanyorwa zvake naMosesi pamurairo navaporofita, iye Jesu weNazareta, mwanakomana waJosefa.
Firipo aive murume aitevera Magwaro. Aiziva zvaive zvakanyorwa muTestamente Yekare uye akakwanisa kuronda zvakaprofitwa pamusoro paMessiasi. Firipo aive mutendi mukuru mukutungamira vanhu kuenda kuna Jesu, kwete kune umwe munhuwo zvake kana sangano. Saka Jesu aimuda kuti ave mupostora kuti atange vaKristu venguva yaizouya nekuvatungamirira kuChokwadi chakanyorwa muBhaibheri. Ndiyo nzira inoziviswa nayo chokwadi. Tinofanira kutevera Magwaro akanangana nezvatiri kutsvaga muBhaibheri. Ndiyo nzira yakashandiswa naFiripo kuti azive kuti Jesu aive Messiasi wavo nekuti akazadzisa zvakaprofitwa pamusoro pake muMurairo waMosesi (maBhuku mashanu ekutanga anodaidzwa kuti Torah) pamwechete nezvimwe zvakaprofitwa muTestamente Yekare.
Firipo aiziva Testamente Yekare. Aikwanisa kuronda Magwaro aitaura pamusoro paMessiasi. Aitenda muna Jesu nekuti aive aziva kuti Testamente Yekare yaitaura pamusoro paJesu.
“Mwanakomana waJosefa” zvinoisa pakukosha pakuva Mwana wekurera. Josefa aive asiri baba vaJesu vekubereka.
RUKA 1:34 Ipapo Maria akati kumutumwa: Izvozvi zvingava seiko, zvandisingazivi murume?
35 Mutumwa akapindura, akati kwaari: Mweya Mutsvene uchavuya pamusoro pako, nesimba roWokumusorosoro richakufukidza; saka icho chitsvene chichaberekwa chichanzi: Mwanakomana waMwari.
Mweya Mutsvene ndiwo Baba vaJesu. Mweya Mutsvene wakazviitira Muviri mumimba maMaria. Maria aingove mutakuri chete. Mweya Mutsvene waigara muna Jesu ndiwo waive Mwari Baba. Munhu wenyama akakura kubva pakuberekwa uku ndiye iave Mwanakomana.
VAHEBHERU 10:5 Saka pakusvika kwake panyika, unoti: Chibayiro nechipo makazviramba, Asi makandigadzirira muviri;
VAHEBHERU 2:16 Nokuti zvirokwazvo, haana kutora chimiro chavatumwa, asi wakazvitorera vana vaAbhurahamu
Mbeu yehupenyu hwemunhu imbeu iri muhurume hwemurume. Mbeu iyi inobva yawana muviri kubva muzai riri mumukadzi.
Mwari akasika mbeu yehurume nezai mumimba maMaria. Mwari achibva aviga Mweya Mutsvene wake muMbeu iyi.
ISAYA 45:15 Zvirokwazvo Muri Mwari unovanda, Imi Mwari waIsraeri Muponesi.
Mwari aive akavanzwa musero imwechete. Munhu akakurisa pasi nedenga, akavanzwa murusvava. Hazvishamisi kuti nei Satani akanyengereka. Simba raMwari risina muganhu pakuita zvinonzi hazvigoneki.
Mwari paakazvideredza akafukidza mhandara Maria, aive Hupenyu. Hupenyu hwakafukidza hukasika sero reropa rikazviputira.
Pane anoziva here kuti sero reropa rakabva papi? Murume. Ndizvo here? Hupenyu hunogara musero reropa, sero reropa rinobva kumurume, kwete mukadzi. Ndimo mune hupenyu, huri mumbeu yemurume. Mazviona. Iye Mwari pachake akabva apinda mudumbu memhandara Maria akazviputira musero reropa raaive azvisikira.
Mwari haafadzwi nekuedza kunoita vanhu kunyange vakazvipira vachisanganisira nekupa zvipo. Maria haana zvaakaita kuti abate mimba kana kuti mwana akure mudumbu rake. Akangova nekutenda kwekuzviwisira pakuita kuda kwaMwari kunova Shoko rake.
RUKA 1:38 Ipapo Maria akati: Tarirai, ndiri mushandiri waShe; ndiitirwe hangu sezvamataura, Mutumwa akabva kwaari.
Mufananidzo wevasikana vane gumi unopatsanura maKristu kuita zvikwata zviviri. Vaya vane mafuta eMweya Mutsvene anogona kutungidza mwenje yavo kuti vaone (kana kunzwisisa) Shoko raMwari rakanyorwa nevasikana vakapusa vasingagoni kunzwisisa zvinhu zvakawanda muBhaibheri nekuti havana mafuta ekutungidza mwenje yavo saka havana mwenje saka havagoni kuverenga Bhaibheri vachinzwisisa. Vari nyore kuona ivavo. Kana vakabvunzwa mubvunzo uri muBhaibheri, wakaita sewekuti “Nei Davidi, aive asiri muprista, akadya chingwa chekuratidzira akasarangwa ? Asi mambo aive akanaka kwazvo Uzzia akarangwa nemaperembudzi paakatora chinzvimbo chemuprista akapisira miti inonhuwira mutembere” Dambudziko rine vaKristu vanhasi vanodaira nekusaziva kwavo uye nekushaiwa hanya kwavo. Vafundisi havagoni kuvatsanangurira saka vakaisa maoko mudenga kare. Havadi kudzidza kubva kune umwe anobva kunze kwesangano ravo nekuti izvi zvinoita kuti zvinzi kereke yavo haina chokwadi chese chezvakavanzika. Munguva yeRaodikia “havadi chiro”. Havadi kugadziriswa nekuti “vanoziva zvese”. Havadi munhu anobva kunze kwekereke yavo kuti avadzidzise . Vanogutsikana nekugara murima rekusaziva kwavo. Ndapota musatikanganise. Ichi ndicho chiratidzo chekuti vanhu vakavata.
Saka kushingirira kwevanhu hakungavake vasikana vakangwara. Asi Mwari anozvigadzirira Muviri kereke yechokwadi inovakwa paMagwaro.
JOHANE 5:39 Munonzvera Magwaro,
Josefa akazvipira kuzorera Mwana aikura muna Maria. Saka Jesu akabva ava mwana waJosefa wekurera zviri pamutemo . Asi Josefa aive mwana werudzi rwaDavidi. Saka nekugamuchira kuita Kuda kwaMwari sezvazvakaitika, zvichibva pakufunga kwevanhu nekuda kwekubereka kwemhandara, Josefa akagonesa Jesu kuzadzisa kuda Kwake kuti ave Mambo wemaJuda. Ndicho chaive chinzvimbo chakakosha chaJosefa muMuono Mukuru waMwari. Semurume aifanira kuriritira Maria nemwana Jesu. Asi mumashure mekuenda kwaJesu kuTemberi pamakore gumi nemaviri ekuberekwa hatina kuzonzwa nezvaJosefa. Aive aisa chidimbu chikuru mutsoro panzvimbo yacho kunyangwe asina, panguva iyoyo, kunzwisisa kuti mucherechedzo wekurera Mwana waive wei.
Konia kana Jekonia kana Jekoniasi muchiGiriki (anodaidzwa zvakare kuti Jehoiachin) aive werudzi rwaDavidi asi aive akaipa kwazvo zvekuti Mwari akabva ati hakunazve umwe werudzi rwake aibva kwaari aizova mambo waJuda. Izvi zvakabva zvabvisa hushe muimba yaDavidi kupfurikidza Mwanakomana wake Soromoni. Saka Josefa aisakwanisa kuva mambo sezvo aive abva pana Konia.
JEREMIA 22:28 "Ko munhu uyu Konia mudziyo wakaputsika unozvidzwa here? Iye mudziyo usingafadzi munhu here? Vakadzingirweiko, iye navana vake, vakadzingirwa kunyika yavasingazivi?"
30 Zvanzi naJehovha, "Nyora kuti munhu uyu haana vana, munhu usingazofari pamazuva ake; nokuti hakuchina murume pakati pavana vake uchava nomufaro,uchagara pachigaro choushe chaDhavhidhi, achibata ushe hwaJudha,"
Asi mwanakomana waDavidi wedangwe Natani aive nedzinza raidzika kusvika kuna Maria. Ndicho chikonzero nei Maria akaita mwedzi mitatu aina Erisabeta kuti azodzoka anemimba ine mwedzi mitatu paanoroorana naJosefa. Izvi zvinoratidza kuti Jesu aive asiri Mwanakomana waJosefa, zvino Josefa akabva aita Mwana kubva mudzinza rakabva naNatani raive rakasununguka kubva pakutukwa kwaConia. Saka Jesu ega ndiye anokwanisa kuva mambo wemaJuda sezvo tambo yehumambo yedzinza iri yaive yadamburwa pana Konia.
Tinodzidza chidzidzo chakakosha. Nekuzadzisa Magwaro ndipo pega patinoshandira kuda kwaMwari kwakanaka. Kazhinji, saJosefa, hationi kukosha kwekutevera zvinodiwa neMagwaro. Asi nguva dzose patinozadzisa Magwaro tinobatsira kufambisa hurongwa hwaMwari hwakarurama kuenda kumberi. Kutenda kana kuita chinhu chisiri muMagwaro kukanganisa mabasa. Idambudziko rinopararira.
JOHANE 1:46 Natanaeri akati kwaari: Kune chinhu chakanaka chingabva Nazareta here? Firipo akati kwaari: Vuya uvone
Nazareta raive guta raive nezvivi kwazvo. Mhosva zhinji uye huwori hwairarama imomo. Zvakafanana neLas Vegas nhasi uno guta rinorarama nekutamba njuga. Hakuna angatarisira chinhu chakanaka kuti chibve munzvimbo yakaita saiyoyo. Asi pano tinodzidza chimwe chidzidzo. Hatifaniri kufanotongera munhu nekuda kwekwaanobva. Kubva muguta rakaipa kudaro makabva Munhu akarurama kwazvo.
Jesu akaverenga mifungo yaNatanaeri. Ndiwo mucherechedzo waMessiasi kuvaJuda.
Pane izvozvo Jesu aitaura kuti, “handisati ndambokuona asi ndinoziva zvese pamusoro pako. Hauna kunyengera mauri. Hausi munyengeri nechero nzira”.
Jesu akaraidza kuti aikwanisa kusvika kure kwenguva nekugona kuziva zvakaitika kumunhu kare uye anokwanisawo kuona munzvimbo dzisingaonekwi dzemweya kuti aone pfungwa dzemunhu uye zvinangwa zvake.
JOHANE 1:48 Natanaeri akati kwaari: Mandizivirepiko? Jesu akapindura, akati kwaari: Firipo asati akudana, uri munyasi momuvonde, ndakakuvona.
Natanieri akashamiswa kwazvo. Munhu wandisati ndamboonana naye angandizive zvakadai sei? Izvi zvinogoneka sei? Jesu aive Munhu akaita sei?
Evangeri raJohane rakazivisa Jesu saMwari, Gondo rinoona zvese.
Natanieri munhu akazvimiririra anomiririra vanhu vose vachaita kereke yaMwari mumakore 2 000 aizotevera. Saka akadzidza, sezvatinofanira kuita tese, kuti Jesu anoona kudarika pamiganhu yese yatinofungira isu vanhu. Jesu akasika nguva uye akasika nzvimbo yemweya yenzvimbo yechishanu. Saka anofanira ari kure kwavo munzvimbo yepamusoro kwazvo kudarika iyi. Anokwanisa kutarisa kumberi kana kumashure munguva. Isu vanhu tinokwanisa chete kuona zvinhu zvishoma zvinenge zvichitoitika kwatiri. Saka Natanieri akabva aziva kuti ari muhuvepo hweMunhu anoShamisa.
Asi kwakabva kwauya chimwe chishamiso, chimwe chishamiso chikuru pakaratidza Jesu kuti anokwanisa kusvika kure kwenzvimbo kuti aone Natanieri ari kure uye kusi kwemeso ake enyama.
Saka Jesu ndiye mambo wenzvimbo nenguva (nzvimbo yedu yedenga nenyika yenzvimbo ina) pamwechete nenzvimbo dzemukati dzemweya nzvimbo yechishanu munoitika ndangariro uye zvinangwa zvemoyo zvichitonga pfungwa dzedu. Nzvimbo yemweya iyi ndiwo musha wemusanganiswa weruzivo rwezose zvakanaka nezvakaipa. Isu vanhu tinogara tichifanira kuita sarudzo kasingagumi pakati pezvakanaka nezvakaipa.
JOHANE 1:49 Natanaeri akamupindura, akati: Rabhi, ndimi Mwanakomana waMwari, ndimi Ishe waIsraeri
Mwari ndiye oga anoziva ndangariro dziri mupfungwa uye mumoyo yevanhu.
I MADZIMAMBO 8:39 Inzwai henyu iko kudenga kwamunogara, mukanganwire, muite, muripire mumwe nomumwe zvakafanira mufambiro wake wose, iye wamunoziva moyo wake; (nokuti imi, imi moga, ndimi munoziva moyo yavana vavanhu vose;)
Munhu anogona kuzivisa ndangariro dzemoyo yevanhu anofaira kuva Messiasi chete. Mwari Baba ndiwo Mweya Mutsvene. Kana kuzara kwovuMwari kuchigara muMunhu iyeye ndiye Mwanakomana waMwari.
Natanieri aive aziva chinhu chinoshamisa. Kuzara kwese kwaMwari kwaigara muna Jesu Kristu.
Saka Jesu aigara kupi?
Jesu aida kuvhura maziso ake kuti aone Muono Mukuru. Mwari, kupfurikidza nyasha, anopa mugove kana mupimo wemweya wake kumuKristu umwe neumwe anenge azvarwa patsva. Zvidimbu zveMweya Mutsvene izvi zvinozogara mumoyo yevaKristu vakazvarwa patsva munguva dzemakereke mumakore 2 000 enhorondo yevanhu zvowedzera pakuzara kweMweya Mtsvene.
Kwaigara Jesu pakati pemaJuda ari Messiasi panguva iyoyo yaive isiri iyo nyaya nekuti zvaive muhurongwa hwake kuti afe paaizorambwa nemaJuda.
Ndicho chikonzero nei vazivi vekumabvazuva vakamupa mura sechipo paaive nemakore maviri mumba. Mura muti unonhuwira unoshandiswa kudzinga mweya pazvitunha sezvo kunhuwira kwawo kunovharidzira kunhuwa kwechitunha chinenge chatanga kuwora. Vazivi vekumabvazuva ava vaive vaziva kuti Jesu aive auya panyika nechinangwa chekufira zvivi zvedu.
Ndarama yaimiririra kuti vaive vaziva kuti ndiye Mwari paMuviri.
Zvinonhuwira zvinoshanda kupa mweya wakanaka kana zvikapiswa mumoto. Mweya wechipo chatsva chezvipo zvekupisa waive usingavaraidzi. Mweya wezvinonhuwira zvakapihwa Jesu waizoita kuti chive chipo chinotambirika.
Saka zvipo zvevazivi vekumabvazuva zvaizivisa kuti vaifungira kuti Jesu aive ani.
Aive Mwari paMuviri achiuya kuzobata basa reChipo chekuripira matadzo chinotambirika. Aizofa kuti aponese vanhu kubva kuzvivi zvedu. Vazivi vekumabvazuva vaive vaona Muono Mukuru waMwari. Ndicho chikonzero vakadaidzwa kuti vazuvi.
Zvino, sekudurura kwakaita Mwari Mweya Mutsvene wake wese muMunhu Jesu, saka Jesu aizodurura Mweya wake wese mumamiriyoni emoyo yevanhu vepasi rese vaizovaka kereke mumakore 2 000 enhorondo.
II MAKORONIKE 6:18 "Ko mukati Mwari ungagara panyika here? Tarira, denga nokudenga-denga hazvingamuringani; ndoda imba ino yandakavaka!
Natanieri akagurwa kunorira. Nzvimbo yechitanhatu yeMweya, Denga, kuchagara vakanaka chete (kwete vakaipa) yakakurisa zvekuti Soromoni akaidaidza kuti denga nokudenga-denga. Hazvisi munjere dzevanhu kuti vafungire chinhu chikuru chakadai. Asi kukura kwacho kwese hakugoni kutakura Mwari.
Asi munhu uyu Jesu akatakura kuzara kwevuMwari!
Mashoko chete haagoni kumutsanangura. Chero mashoko erumbidzo anotaurwa kwaari akanaka asi haatokwaniri zvachose. Jesu haakwanisi kutsanangurwa nevanhu nesimba renjere dzavo.
Nzvimbo yake yekugara iri mumoyo yekereke yemaKristu aizouya, vatendi vanotenda muShoko raMwari rakanyorwa rikaziviswa kukerek yenguva yavanenge vachirarama. Ndiye Musoro uye vatendi vepasi rese venguva dzese dzemakereke vakabatana vanozova Muviri waKristu wakavanzika.
JOHANE 1:50 Jesu akapindura, akati kwaari: Unotenda iwe, nokuti ndakati kwauri, ndakakuvona munyasi momuvonde here? Uchazovona zvikuru kunaizvozvi.
Kuona Natanieri ari kure kwazvo kunoratidza simba rina Jesu pamusoro pedenga nenyika. Anogona kuona zvinhu zvese mukati medenga nenyika uye mukati menguva. Anorarama pamusoro penzvimbo yechishanu yemweya yevanhu sezvo iri musanganiswa wezvakanaka nezvakaipa.
JOHANE 1:51 Akati kwaari: Zvirokwazvo, zvirokwazvo, ndinoti kwamuri: Kubva zvino Muchavona kudenga kwazarurwa, navatumwa vaMwari vachikwira, nokuburukira pamusoro poMwanakomana womunhu.
Vatumwa, muhuzhinji. Vaviri vavo.
Iri ndiro Evangeri raJohane rinozivisa Jesu ari Mwari, Gondo guru rinobhururuka kuenda kumusoro-soro kunzvimbo dzedenga nemeso ake anoshamisa anoona zvese.
Patinofunga isu kuti tinonzwisisa Chitsauko chekutanga, Jesu anotikandira bhora rinonzvenga kuti atiyeuchidze kuti tinoziva zvishoma zvakadii. Vhesi rekupedzisira iri rinotiita kuti tikwenye misoro yedu zvakanyanya.
Mwanakomana wemunhu ndihwo hushumiri hwake ari munhu anouya semusununguri kuzoponesa rudzi rwevanhu. Saka apa anotarisa pakadzama kupinda Muviri wake wenyama, waanoona sechipo, kukereke yake muviri wakavanzika wevatendi vose vanozouya kwese kwavari nekufamba kwenguva, mumakore 2 000 anouya, kana dzipi nzvimbo dzavari munzvimbo dzemweya panoparidzwa Evangeri panyika.
ZVAKAZARURWA 5:3 Asi kwakanga kusinomunhu kudenga napanyika, kana napasi penyika, wakagona kuzarura bhuku iyo, kana kutarira mairi.
Bhaibheri raMwari rakazara zvakavanzika zvekuti vanhu, neruzivo rwavo rwune miganhu, havagoni kuzvinzwisisa.
Asi munguva yega yega yekereke vaKristu vechokwadi vanoda kuziva zvakavanzika zveBhaibheri zvakasarudzika kuti vakunde Satani.
Kereke yekutanga yaiziva zvakawanda zvezvakavanzika zvakanyorwa, asiwo kwaive nezvimwe zvakavanzika zvaive zvisina anoziva zvaive zvisina kubvira zvanyorwa muBhaibheri. Kwagara kuine chimwe chinhu chatisingakwanisi kuziva saka zvakadaro naSatani haakwanisiwo kuchiziva. Kusazivisa hurongwa hwaMwari hwese, kunosiira Mwari mukana wekuita Satani rema.
Bhaibheri harina kubvira razivisa nguva yekuuya kwaJesu kuzosangana nekereke yake mumakore kuti ikwire Kudenga.
Chisimbiso chechinomwe kuna Zvakazarurwa 8:1 chingori runyararo.
Zvakarehwa neKutinhira kunomwe kuna Zvakazarurwa Chitsauko 10 hazvina kunyorwa.
Zita idzva raJesu kuna Zvakazarurwa Chitsauko 19 haritenderwi kuzivikanwa nechero munhu.
Kereke yekutanga haina kubvira yaziva zvakavanzika izvi.
Asi vaive nemutumwa, mutumwa ainzi Pauro, akakwira kudenga rechitatu.
II VAKORINTE 12:2 Ndinoziva munhu uri munaKristu, ave makore anegumi namana apfuvura, (kana zvakaitwa mumuviri, kana kunze kwomuviri, handizivi; Mwari unoziva), munhu wakadai wakakwidzwa kudenga rechitatu.
3 Vuye ndinoziva munhu wakadai (kana zvakaitwa mumuviri kana kunze kwomuviri, handizivi; Mwari unoziva)
4 kuti wakakwidzwa muparadhiso, akanzwa mashoko asingagoni kutaurwa, asina kutenderwa munhu kuti areve.
Munzvimbo yechitanhatu, inogarwa nevatumwa nevanhu vakaponeswa, zvinhu zviri muchidanho chepamusoro kwazvo kukunda kunzwisisa kwedu isu vanhu kune miganhu, zvekuti Pauro, mutumwa mukuru kana nyeredzi yekereke yekutanga, haaigona kutaura zvese zvaakanzwa.
Asi Pauro zvakadaro akadzidza zvakawanda kwazvo zvezvakavanzika zvakadzama zvakaita kuti agone kunyora mabhuku mazhinji eTestamente Itsva.
Nguva imwe neimwe yekereke yaizova nemutumwa kwairi kana nyeredzi yaizogamuchira hutungamiri kubva Kudenga hwaizogonesa kereke yechokwadi, Muviri waJesu wenyama nekuti anogara mumoyo yavo, kuti irarame mukuipa kwakasiyana-siyana kwekurovererwa naSatani.
Mutumwa wechinomwe kana nhume aizotorwa musi wa 8 Kurume 1963 pamakomo eSunset Peak padyo neguta reTucson muArizona, kuAmerica, kupinda pakati pechikwata chevatumwa vanomwe akapihwa basa kuti adzokere kuJeffersonville muIndiana kunozivisa zvakavanzika zveZvisimbiso zvinomwe kuna Zvakazarurwa Chitsauko 6.
Mumwe nemumwe wevatumwa vanomwe ava aive mutumwa akambouya kunguva imwe yemakereke kuzotungamirira munguva yekereke iyoyo. Mutumwa wekutanga newechinomwe ndivo vega vakatorwa kunopinda munzvimbo dzepamusoro-soro dzedenga.
Vamwe vatumwa vashanu vaive vasingazivi huvepo hwengirozi dzaivatungamirira muhushumiri hwavo. Varume vanomwe ava vaizopihwa maonero eDenga mukuipa kwenguva dzavo uye zaruriro dzezvakavanzika zveBhaibheri kuti vatungamirire nguva dzavo. Zaruriro idzi dzakazivisa hurongwa hwaMwari pamusoro pekurarama kwekereke yake pasi panyika.
Jesu akapa Natanieri muono mukati meMuono wake Mukuru. Nguva nomwe dzemakereke ndidzo hushe hweDenga. Zvinoitika panyika mufananidzo wekurwa kukuru pakati paMwari naSatani.
Jesu, Shoko rakanyorwa, ndiye munyai pakati peDenga nenyika. Vatumwa vanotanga kuwana kurudziro yedenga kuti vaunze zaruriro yeShoko kunguva yavo kuhwaro hwevatendi vechokwadi kunguva iyoyo. Mutumwa mumwe nemumwe kana nhume aifanira kutsvaga kuti Jesu aigarepi, muShoko rakanyorwa kunguva iyoyo.
Saka ndimo maigara Jesu. Muzaruriro yeShoko rakanyorwa kunguva iyoyo.
Kana tichigona kunzwisisa Shoko rakanyorwa rakanzwisiswa rikatendwa mariri nekereke yekutanga tinenge tasangana neChikomba iye Jesu.